ကောငျးတာထကျတောငျပိုသေးတယျရှငျ့ – My Blog
ပှမျ….ပှမျ….” “ လာပွီ….လာပွီ..” “ ကြှီ……….” အိမျရှမှေ့ ကားဟှနျးသံကွားရပွီး မမွလေး၏ အသံနှငျ့အတူလမျးလြှောကျသှားသံ၊ အိမျတံခါးဖှငျ့သံတို့ကို တဈဆကျတညျး ကွားလိုကျရသဖွငျ့ အိပျမောကနြသေော ကိုလငျးတဈယောကျ အိပျရာမှ လနျ့နိုးသှားရသညျ။ ဘာတှေ လုပျနကွေသလဲ သိခငျြသဖွငျ့အိပျခနျးတံခါးကို အသာဟ၍ ကွညျ့လိုကျရာ အထုပျအပိုးမြားနှငျ့အိမျရှေ့ ထှကျသှားသော ကိုစိုးမွငျ့တို့လငျမယားကိုလှမျးတှလေို့ကျရသောကွောငျ့တံခါးကိုအသာပွနျစထေ့ားလိုကျသညျ။
ညက ကိုလငျးတဈယောကျအတျောညဉျ့နကျမှ အိမျပွနျရောကျသဖွငျ့ကိုစိုးမွငျ့နှငျ့မမွလေးတို့လငျမယား နှဈယောကျ ယခုကဲ့သို့ ခရီးသှားမညျဆိုတာ မသိလိုကျခွငျး ဖွဈသညျ။ ကိုလငျးရငျထဲမှာ ဝမျးနညျးသလိုလို ဖွဈသှားရပွီး ဟာတာတာ၊ ဆာတာတာ ဖွဈနရေသညျ။ ကိုစိုးမွငျ့နှငျ့မမွလေးတို့ လငျမယားကို ကွညျ့ပွီး မနာလို ဝနျတိုစိတျမြားကလညျး ပျေါပေါကျလာခဲ့သညျ။ကိုလငျးအနဖွေငျ့သူ၏စိတျထဲမှဤသို့ဤပုံဖွဈနသေညျမြားကိုကား ကိုစိုးမွငျ့တို့လငျမယားအနဖွေငျ့သိခငျြမှ သိပလေိမျ့မညျ။ ယခုကဲ့သို့ကိုစိုးမွငျ့တို့လငျမယား အတူသှားအတူလာ၊ အတူစား အတူအိပျကွသညျကို ကွညျ့မိတှေးမိတိုငျး ကိုလငျးရငျထဲမှာ သဝနျတိုစိတျ၊ ဝမျးနညျးစိတျ၊ ယူကြုံးမရစိတျ၊ နှမြောတသ စိတျမြား အမွဲတမျးဖွဈမိရသညျ။
ဘယျသူ့ကိုတိုငျတညျပွီး၊ ဘယျသူ့ကိုပွောလို့ဘယျသူ့ကိုအပွဈပုံခရြမညျဆိုတာတော့ကိုလငျမဝခှေဲနိုငျ ဖွဈရသညျ။ ကိုလငျးစဉျးစားနသေညျ့ အခြိနျတှငျအိမျရှမှေ့ ကားထှကျသှားသံကို ကွားလိုကျရသညျ။ ကိုလငျးမှာ အိပျရာပျေါ ပကျလကျလှနျလကျြ ပွနျလှဲနလေိုကျပွီး နဖူးပျေါ လကျတငျလကျြ စဉျးစားခနျး ဝငျနလေိုကျသညျ။ ကိုလငျးနှငျ့ ကိုစိုးမွငျ့တို့က ငယျငယျကတညျးက အတူတတှဲတှဲ နခေဲ့ကွသညျ့ ငယျသူငယျခငျြးမြား ဖွဈသညျ။ ဆယျတနျးအောငျပွီး အလုပျမြား ဝငျကွခြိနျတှငျမတော့ကိုစိုးမွငျ့က စိုကျပြိုးရေးရုံးမှာ အလုပျဝငျခဲ့သညျ။ ကိုလငျးက တရားရုံးမှာ အလုပျဝငျပွီး စာရေးအလုပျကိုလုပျခဲ့သညျ။ ကိုလငျးက အိမျထောငျမရှိသော လူပြိုဖွဈခဲ့သညျ။
ကိုစိုးမွငျ့ကတော့ လှနျခဲ့သော တဈလခနျ့ကမှ အိမျထောငျကသြညျ။ ဘဏျရုံးတှငျ အလုပျလုပျနသေော မမွလေးနှငျ့ဖွဈသညျ။ကိုစိုးမွငျ့နှငျ့မမွလေးတို့အိမျထောငျကခြိနျတှငျနထေိုငျစရာအိမျကအဆငျသငျ့မရှိသေးသညျ့ အတှကျကိုလငျးအိမျတှငျလာရောကျနထေိုငျသညျ။ ကိုလငျးကလညျး သူငယျခငျြးအရငျးကွီးဖွဈ၍ ကိုစိုးမွငျ့တို့ လငျမယားအတှကျ လိုအပျသော အကူအညီမြား ပေးသညျ့အနဖွေငျ့ အိမျပျေါချေါတငျ ထားခဲ့ခွငျးဖွဈသညျ။ ကိုစိုးမွငျ့တို့လငျမယားလညျး ကိုလငျးအိမျမှာ သဘောကြ နထေိုငျခဲ့ကွသညျ။
ကိုလငျးအိမျမှာ မိဘမြားက အမှပေေးထားခဲ့သော အိမျဖွဈပွီး ၂၅ ပေ . ၆၀ ပေ ရှိခွံဝငျးကလေးထဲတှငျ ပေ ၂၀ . ၄၀ ၊ ၃ ပငျနှဈခနျး တဈထပျပဉျြထောငျအိမျကလေးကိုဆောကျထားခွငျးဖွဈသညျ။ တဈထပျပဉျြထောငျ အိမျကလေးကိုအစပထမက ကိုလငျးတဈယောကျတညျး နထေိုငျသဖွငျ့ဖွဈသလိုပငျနခေဲ့သျောလညျး ကိုစိုးမွငျ့တို့ လငျမယား အိမျမှာ လာနမေညျဆိုတော့အိမျကို ပွနျလညျပွငျဆငျမှမျးမံခဲ့ရသညျ။ အိမျရှခေ့နျးနှငျ့ဘုရားခနျးကိုတဈဆကျတညျး ထားပွီး၊ အိပျခနျးနှဈခနျးကိုသုံးထပျသား နံရံဖွငျ့ခနျးစီးကာရံ ဖှဲ့ထားလိုကျသညျ။ နောကျဖကျတှငျမီးဖိုခနျးကလေး ထားလိုကျသညျ။
အိပျခနျးနှဈခနျးမှ ဘုရားခနျးနှငျ့ကပျလကျြ အခနျးကို ကိုလငျးကယူပွီး အတှငျးခနျးကို ကိုစိုးမွငျ့တို့ လငျမယားအတှကျ ပေးလိုကျသညျ။ ကိုလငျးအနဖွေငျ့ သူငယျခငျြးဖွဈ၍လညျး အားနာနာဖွငျ့အိပျခနျးဖှဲ့ပေးထားရသျောလညျး အိမျကလေးက ကဉျြးနသေဖွငျ့စိတျတိုငျး မကြ ဖွဈခဲ့ရသညျ။ ဘာကွောငျ့လညျး ဆိုတော့ ကိုစိုးမွငျ့တို့ လငျမယားအတှကျအမွနျဆုံး အခနျးဖွဈအောငျဖှဲ့ပေးရသဖွငျ့ ကိုလငျးနှငျ့ကိုစိုးမွငျ့တို့ အခနျးမှာ သုံးထပျသား ပါးပါးလေးကိုသာခံပွီး ကာထားရသဖွငျ့ကိုစိုးမွငျ့တို့ အိပျခနျးမှ လှုပျရှားသံမြားကို ကွားကွားနရေသညျဖွဈ၍ မိမိကိုယျကို မိမိစိတျတိုငျးမကြ ဖွဈရခွငျး ဖွဈလသေညျ။ နောကျဆုံး မှာတော့ စိတျတိုငျးမကသြော စိတျမြားကို လှတျပေးလိုကျသညျ့အနဖွေငျ့သုံးထပျသားနံရံကို အပေါကျလေးမြား ဖောကျလိုကျတော့သညျ။ ကိုစိုးမွငျ့တို့လငျမယား မသိအောငျလညျး ကွံဖနျရသေးသညျ။ ဒီလိုနှငျ့ကိုလငျးတဈယောကျစိတျတိုငျးကြ သှားရတော့သညျ။
ကိုလငျးမှာ ယခငျက ထမငျးကိုဆိုငျမှာပဲ စားခဲ့သျောလညျး ကိုစိုးမွငျ့တို့လငျမယား ရောကျလာပွီး နောကျတှငျတော့ မမွလေး လကျရာကို စားခဲ့သညျ။ မမွလေးမှာ အိမျမှုကိစ်စနိုငျနငျးသလို အခကျြအပွုတျလညျး ကြှမျးကငျြသညျ။ ရုံးသမားမြားမို့မနကျဖကျထမငျးခကျြကာ ထမငျးခြိုငျ့ကိုယျစီထညျ့ပေးသညျ။ ညနဆေိုရငျတော့ သုံးယောကျပေါငျး အတူတူထမငျးစားကွသညျ။ ညဖကျဆိုလြှငျကိုလငျး အခနျးထဲဝငျပွီး ရုံးအလုပျတှေ လုပျလရှေိ့သညျ။ ကိုလငျးအနဖွေငျ့အခနျးနံရံမြားကို အပေါကျမြား ဖောကျပွီးပွီဆိုကတညျးက အိပျခနျးထဲ စောစောဝငျလတေော့သညျ။ ကိုလငျး အိပျခနျးထဲ စောစောဝငျ မှသာလြှငျကိုစိုးမွငျ့နှငျ့မမွလေးတို့လငျမယားမှာ စောစောအလုပျဖွဈကွမညျမဟုတျလား။
အပေါကျမဖောကျခငျ အခြိနျတုနျးကတော့ကိုစိုးမွငျ့တို့လငျမယား၏ လိငျဆကျဆံကွပုံမြားကိုအသံဖွငျ့သာ ကွားရသညျဖွဈ၍ ကိုလငျးမှာ အားမရနိုငျပဲ ဒုက်ခတှနေ့ရေသညျ။ အပေါကျမြား ဖောကျပွီးခြိနျတှငျမတော့ တဈမြိုးဒုက်ခရောကျရပွနျသညျ။ ကိုစိုးမွငျ့နှငျ့မမွလေးတို့ လိုးကွ ဆျောကွသညျကိုတှမွေ့ငျနရေသဖွငျ့ကိုစိုးမွငျ့နှငျ့မမွလေးတို့၏ ဝတျလဈစလဈကိုယျလုံးမြား၊ မမွလေး၏ နို့အုံကွီး မြား၊ မမွလေး၏ စောကျဖုတျကွီး၊ တငျပါးဆုံပွောငျဝငျးအိအိကွီးမြားကို တှမွေ့ငျရပွီး မမွလေးကို လိုးခငျြစိတျတှေ ထိနျးမနိုငျသိမျးမရ တဖှားဖှား ပျေါပေါကျလာနရေသညျ။မမွလေးကိုမှနျးပွီး မိမိဖာသာမိမိဂှငျးတိုကျပွီး အကွောဖွေ ရတာ ညတိုငျးလိုလိုပငျ ဖွဈလာသညျ။ မဖွဈလို့ကလညျး ရမှမရတာလေ။
ကိုစိုးမွငျ့နှငျ့မမွလေးတို့မှာ ညားခါစ ဖွဈသဖွငျ့ညတိုငျးလိုလိုပငျလိုးကွဆျောကွတာကို မွငျတှနေ့ရေ၍ ဖွဈတော့သညျ။ ညတုနျးကလညျး ကွညျ့လေ။ ကိုလငျးတဈယောကျအလုပျကိစ်စတဈခုရှိ၍ ည ကိုးနာရီကြျောကြျောမှအိမျပွနျ ရောကျလာသညျ။ကိုစိုးမွငျ့နှငျ့မမွလေးတို့မှာ အိမျရှခေ့နျးတှငျတီဗှီကွညျ့နကွေသညျ။ကိုလငျးမှာ အိမျရှခေ့နျးတှငျ ကိုစိုးမွငျ့နှငျ့ခဏစကားထိုငျပွောပွီး အိပျခနျးထဲဝငျကာ မီးပိတျပွီး ခုတငျပျေါ လှဲလိုကျသညျ။ ထိုအခြိနျမှာပဲ ကိုစိုးမွငျ့ တို့လငျမယားမှာ တီဗှီပိတျ၍ အိပျရာဝငျလာကွသညျ။ ထုံးစံအတိုငျးပငျလိုးကွဆျောကွတော့မညျဆိုတာ သိပွီးဖွဈ သဖွငျ့ကိုလငျးက အပေါကျဖှငျ့ပွီး ခြောငျးကွညျ့နသေညျ။
“ မွလေးရေ….. ကိုယျတို့လိုးကွရအောငျ…” “ ဟငျး…..တျောတျောထနတေယျ….” “ ဟုတျဖူးလေ….မွလေးကလဲ…. ကိုစိုးက လိုးခငျြလှနျးလို့ပွောတာပါ.. မွလေးက မခံခငျြဘူးလား…” “ ဘှာတေး….ဘှာတေး….. မွလေးက ကိုစိုးကိုခဈြလို့စတာပါ…ဟိုဖကျခနျးက ကိုလငျးတောငျအိပျသေးရဲ့ လား လို့………” “ ခပျစောစောကပဲ ဝငျသှားတာ…အိပျရောပေါ့မွလေးရာ…လာပါ…လိုးကွရအောငျ…” ကိုစိုးမွငျ့နှငျ့မမွလေးတို့မှာ အိပျခနျးထဲ ရှဆေ့ငျ့နောကျဆငျ့ဝငျလာပွီး ပွောနကွေခွငျးဖွဈသညျ။ ကိုစိုးမွငျ့ ပွောသမြှကို မမွလေးက ပွနျပွောရငျး တဈခကျြတဈခကျြတှငျကိုလငျးခြောငျးကွညျ့နသေော အပေါကျဆီကိုလှမျး လှမျးကွညျ့သညျကို အပေါကျမှ ခြောငျးကွညျ့နသေော ကိုလငျး သတိထားမိလာသညျ။
ကိုလငျးမှာ ခြောငျးကွညျ့ နရေတာကိုစိတျထဲမလုံသလိုခံစားလာရသဖွငျ့ဆကျမကွညျ့တော့ပဲ အိပျရာထဲ ပွနျလှဲအိပျလိုကျသညျ။ ကိုလငျးရငျထဲတှငျလညျး တဈဖကျခနျးကိုခြောငျးကွညျ့နတေဲ့အပေါကျကိုမမွလေးက ရှာဖှတှေသှေ့ားတာ ဖွဈပွီး သူတို့လိုးနတေုနျး ကိုလငျးခြောငျးကွညျ့နသေညျကို မမွလေး ရိပျမိသှားမညျကို စိုးရိမျမိသညျ။ ကိုစိုးမွငျ့က တော့ ဘာမှသိမညျမဟုတျသျောလညျး မမွလေး၏ မကျြလုံးထဲတှငျသူကွညျ့နသေော အပေါကျဆီသို့ ကွညျ့ရငျး သူကွညျ့နမှေနျးသိသော အရိပျအယောငျမြား ပါဝငျနကွေောငျး ကိုလငျးခံစားမိသညျ။
“ အ…အဟငျး….ဟငျး….ကိုစိုးရယျ…. ယားတယျ…ကှယျ….ဟငျ့….ဟငျး…” တဈဖကျခနျးမှမမွလေး၏ ညညျးညူသံကို ကွားရသဖွငျ့ကိုလငျး မနနေိုငျတော့ပဲ ထပွီး ခြောငျးကွညျ့မိပွနျ သညျ။ ကုတငျပျေါတှငျမမွလေးကိုကနျ့လနျ့ဖွတျအိပျလကျြတှရေ့ပွီး မမွလေး၏ ဖငျကွီးတှကေ ကုတငျစောငျးတှငျ တငျနသေညျ။ ကိုစိုးမွငျ့ရော မမွလေးပါ အဝတျအစားဟူ၍ လုံးဝမရှိဘဲ ကိုယျလုံးတီးမြားဖွငျ့ဖွဈနသေညျကိုအခနျး အလယျတှငျထှနျးထားသော နှဈပမေီးခြောငျး အလငျးရောငျဖွငျ့ကိုလငျးတှလေို့ကျရသညျ။ ကိုလငျးအနဖွေငျ့တဈခုအဆငျပွတောက ကိုစိုးမွငျ့တို့လငျမယား လိုးကွဆျောကွလြှငျနှဈပမေီးခြောငျးကို အမွဲတမျး ထှနျးထားသညျဖွဈသဖွငျ့ကိုစိုးမွငျ့တို့၏ လိုးပှဲကို ကောငျးကောငျး မွငျနရေစမွဲ ဖွဈလသေညျ။
ကိုစိုးမွငျ့ က မမွလေး၏ ကိုယျပျေါမှ အုပျမိုးလကျြ မမွလေး၏ နို့နှဈလုံးကို ကိုငျတှယျဆုပျနယျပေးနသေလို မမွလေး၏ ပွညျ့တငျးဖောငျးကားနသေော စောကျဖုတျကလေးကို လကျဖွငျ့ပှတျသပျပေးနရောမှ လကျညှိုးဖွငျ့ထိုးမှကေလိ ပေးနလေသေညျ။ မမွလေး၏ စောကျခေါငျးထဲမှစောကျရညျကွညျမြား တစိမျ့စိမျ့ထှကျကနြသေဖွငျ့ကိုစိုးမွငျ့က လကျညှိုးဖွငျ့ ထိုးမှခြေိနျတှငျတစှပျစှပျအသံမြား မွညျနသေညျကို အတိုငျးသား ကွားနရေသညျ။ ကိုစိုးမွငျ့က မမွလေးကို နှိုးဆှ ပေးပွီး သောအခါတှငျကုတငျစောငျး၌ တှဲလောငျးလေးဖွဈနသေော မမွလေး၏ ပေါငျနှဈဖကျကို ဆှဲ၍ဖွဲကာ သူ၏ ၇ လကျမကြျောလောကျထှားကွိုငျးသနျမာလှသော လီးတနျကွီးကိုလကျတဈဖကျဖွငျ့ကိုငျ၍ မမွလေး၏ ပွဲအာလာ သော စောကျဖုတျအဝတှငျ တလေို့ကျသညျ။
ပွီးနောကျ မမွလေး၏ ပေါငျနှဈဖကျကို လကျမြားဖွငျ့ ဆှဲကိုငျပွီး လီးတနျကွီးကိုထိုးသှငျးလိုကျသညျ။ “ စှပျ….ဒုတျ……” “ အား…အား….အငျး….အငျ့…. ကိုစိုးရယျ…..အာ…..အ..ဟငျ့…” အရညျကွညျမြားဖွငျ့စိုစှတျလိမျးကြံနသေော မမွလေး၏ စောကျခေါငျးအတှငျးသို့ကိုစိုးမွငျ့၏ လီးတနျကွီး တဈခြောငျးလုံး အရငျးထိတဆုံးဝငျရောကျသှားပါသညျ။ မမွ လေးမှာ တဈခကျြမြှ တှနျ့သှားပွီး အားခနဲ အသံထှကျ၍ ညညျးညူလိုကျသျောလညျးမမွလေး၏အသံကအားရကနြေပျမှုတှေ အပွညျ့ပါဝငျနသေညျ။ကိုစိုးမွငျ့ကမမွလေး၏ ပေါငျနှဈဖကျကို ကိုငျလြှကျ လီးတနျကွီးကို ဆှဲနှုတျကာ ပွနျဆောငျ့သှငျးလိုကျသညျ။ ဆကျပွီး လီးတနျကွီးကို ပွနျထုတျ၊ ထိုးသှငျး လုပျကာ ဆောငျ့လိုးနသေညျမှာ တဖွညျးဖွညျးနှငျ့မွနျဆနျသှကျလကျလာတော့သညျ။
“ စှပျ…..ပွှတျ…..ပလှတျ….စှပျ……ပွှတျ….” ကိုစိုးမွငျ့၏ လီးတနျကွီးမှာ မမွလေး၏ စောကျခေါငျးထဲ ဝငျသှားသောအခါ စှပျခနဲ ပွှတျခနဲ မွညျသှားပွီး ကိုစိုးမွငျ့၏ တှဲကနြသေော လီးပွှတျဥကွီးကလညျး မမွလေး၏ စအိုဝကိုဖတျခနဲ ဖတျခနဲ သှားရိုကျမိပွီး အသံတို့မှာ စညျးခကျြကကြပြငျထှကျပျေါနတေော့သညျ။ မမွလေးမှာ ကိုစိုးမွငျ့၏ လိုးဆောငျ့ခကျြနှငျ့အတူ အားမလိုအားမရ ဖွဈလာရဟနျဖွငျ့ အောကျမှနေ၍ ဖငျကွီးမြားကို ကော့မွှောကျပငျ့တငျပေးနတေော့သညျ။ ကိုစိုးမွငျ့သညျမမွလေး၏ လုံးကဈြပွညျ့ဖွိုးနသေော နို့ နှဈလုံးကို စုံကိုငျပွီး ဖိဆောငျ့နသေညျ။ ကိုလငျးကွညျ့နသေော အပေါကျမှာ ကိုစိုးမွငျ့တို့ လိုးနသေော နရောကို ကှကျကှကျကှငျးကှငျး မွငျရသညျဖွဈရာကိုစိုးမွငျ့၏လီးကွီးဆောငျ့လိုးလိုကျသညျ့အခါမမွလေး၏စောကျဖုတျလေး ခှကျဝငျသှားသညျကိုတောငျတှမွေ့ငျနရေသညျ။
“ ဆောငျ့…ဆောငျ့….ကောငျးလာပွီး…ကိုစိုးရဲ့…အား…….အငျ့..ကောငျးတယျ..” “ စှပျ…ဖှတျ….ပွှတျ….ဖတျ……စှပျ…..” “ ကိုစိုးလညျး…..ကောငျးလာပွီ……အား….သိပျကောငျးတာပဲ…..တအားဆောငျ့တော့မယျ…နျော…” “ စှပျ….ပွှတျ……ဖှတျ…..ဖတျ…” “ ဆောငျ့ပါ….အား….အီး…ဆောငျ့ပါ……အားမနာနဲ့…ဆောငျ့သာဆောငျ့….အ…အိ…မညှာနဲ့…ဆောငျ့” “ စှပျ…..ပွှတျ…..ဖတျ…….ဖှတျ….ဖတျ…စှပျ…..” မမွလေးက အတတျနိုငျဆုံး ဖငျကွီးကို ကော့ကော့တငျပေးရငျး အသံထှကျညညျးညူလာသလို ကိုစိုမွငျ့ ကလညျးခွဖြေားထောကျကာအားစိုကျဆောငျ့လိုးပေးသညျ။
မကွာခငျမှာပငျမမွလေး၏ကိုယျခန်ဓာတဈခုလုံးတောငျ့ တငျး၍ မေးဖြားလေးမြား ဆတျခနဲ ဆတျခနဲ မော့၍ မော့၍ တကျသှားခြိနျမှာ ကိုစိုးမွငျ့ကလညျး ပါးစပျကွီးဟလကျြ လီးတနျကွီးအား မမွလေး စောကျဖုတျကွီးထဲ အရငျးထိထိုးသှငျးကပျလိုကျရငျး ငွိမျကသြှားရတော့သညျ။ ကိုလငျးမှာလညျး ခြောငျးကွညျ့နရေငျး ထောငျ၍ မာတငျးလာသောသူ့လီးကွီးကိုပုဆိုးအတှငျးမှထုတျလကျြ ဂှငျးတိုကျပဈလိုကျရာ သုတျရညျမြား ပနျးထှကျသှားလတေော့သညျ။ ဤသညျမှာ ကိုလငျးအနဖွေငျ့အိပျရာပျေါတှငျ လှဲနရေငျး ညက ကိုစိုးမွငျ့တို့လငျမယား လိုးနတောကိုခြောငျးကွညျ့ခဲ့ရပုံကို ပွနျစဉျးစားနမေိခွငျးပငျဖွဈသညျ။
ကိုစိုးမွငျ့နှငျ့မမွလေးတို့နှဈဦးစလုံး ကားဖွငျ့ထှကျသှားသညျကိုတှလေို့ကျရပွီး ကုတငျပျေါတှငျပကျလကျ လှနျစဉျးစားနမေိရာတှငျပုဆိုးထဲမှလီးတနျကွီးက ထောငျထလာရပွနျလသေညျ။ ကိုလငျးမှာ ပုဆိုးကိုလြောခလြိုကျ ပွီး တောငျထနသေော လီးတနျကွီးကိုလကျဖွငျ့တငျးတငျးဆုပျလိုကျကာ ပှတျသပျပေးနလေိုကျသညျ။ “ ကြှီး…အိ……အီ…” အခနျးတံခါးဖှငျ့သံကို ခပျတိုးတိုး ကွားလိုကျရသဖွငျ့ ကိုလငျးမှာ အိပျရာပျေါမှနေ၍ အခနျးတံခါးဝဆီသို့ လှမျးကွညျ့လိုကျမိသညျ။ သူ၏ အခနျးတံခါးမှာ ပှငျ့ဟသှားပွီး အထဲသို့ လူတဈယောကျ ဝငျလာပွီး၊ မနကျခငျး အာရုဏျတကျခြိနျမို့အခနျးထဲ ဝငျလာသူကိုသဲသဲကှဲကှဲ မမွငျရခြေ။
သို့သျောအခနျးတံခါးကို ပွနျပိတျပွီး ကိုလငျး ကုတငျဘကျဆီသို့လြှောကျလာသော ဟနျပနျကိုတှလေို့ကျရသညျနှငျ့မိနျးကလေးတဈယောကျပုံစံဖွဈပွီး၊ ကုတငျ နား နီးလာခြိနျတှငျတော့အခနျးထဲဝငျလာသူမှာ မမွလေး ဖွဈနကွေောငျး တှလေို့ကျရသညျ။ ကိုလငျးမှာကိုစိုးမွငျ့တို့လငျမယားနှဈယောကျခရီးထှကျသှားပွီးအိမျတှငျဘယျသူမှမရှိခြိနျတှငျအခနျးထဲသို့ မိနျးမတဈယောကျ ဝငျလာသောကွောငျ့ အိပျမကျ မကျနတောမြားလားဟူ၍ တှေးတော စဉျးစားမိသျောလညျး ကုတငျနားသို့ရောကျလာခြိနျတှငျမမွလေး ဖွဈနသေဖွငျ့အံ့သွမှုမြားပငျဖွဈရသညျ။
ဒါဆိုရငျ… ခရီးသှားသညျမှာ ကိုစိုးမွငျ့တဈယောကျတညျးဖွဈပွီး မမွလေး မလိုကျသှားပဲ ကနျြခဲ့ကွောငျး ကိုလငျး သခြောသိလိုကျရတော့သညျ။ မမွလေးမှနျး သိလိုကျသညျနှငျ့ညဦးပိုငျးက ကိုစိုးမွငျ့နှငျ့အပွတျလိုးကွဆျောကွစဉျက မမွလေး၏ စောကျဖုတျပွဲပွဲကွီးကို ပွနျမွငျယောငျမိပွီး ကိုလငျး၏ ဒုတျကွီးက ပိုပွီး မာတငျးကာ ထောငျထလာတော့သညျ။ လီးတနျကွီးကိုကိုငျဆုတျထားလကျြ တနျးလနျးကွီးဖွဈနသေဖွငျ့ကိုလငျးမှာလကျကိုပွနျမခှာတော့ပဲ ဒီအတိုငျးထား ကာ မကျြလုံးလေးမှေးစငျးလကျြမမွလေး ဘာမြားလုပျမလဲဟုစောငျ့ကွညျ့နလေိုကျသညျ။
မမွလေးမှာ ကိုလငျး အိပျပြျောနတော ဟုတျမဟုတျ ကုတငျဘေးနားကပျလကျြ လလေ့ာပွီးသောအခါ ကိုလငျး တဈယောကျအိပျပြျောနကွေောငျး သခြောသှားမှ ကုတငျပျေါသို့ ခွငျထောငျမကာ တငျပလှဲ ထိုငျလိုကျ သညျ။ ကိုလငျးပုဆိုးမှာ လြှောကြ ကြှတျ၍နပွေီး လီးတံမာမာကွီးက တောငျထနကော ကိုလငျး၏ လကျဖွငျ့ ဆုတျကိုငျထားသညျကို မမွလေးက မကျမောစှာ စူးစိုကျကွညျ့နသေညျကို မကျြလုံးမှေးထားရငျး ကိုလငျးတှမွေ့ငျ လိုကျရသညျ။ ကိုလငျးမှာ အိပျမောကနြသေယောငျဆောငျလကျြအသကျကို မှနျမှနျရှူနရေငျး မမွလေး ဘာဆကျလုပျ မညျကို အသာစောငျ့ကွညျ့နသေညျ။
မနကျခငျး အလငျးရောငျခွညျက အခနျးထဲ ဝငျနပွေီဖွဈရာ အခနျးထဲတှငျ လငျးလငျးခငျြးခငျြးကွီးမဟုတျပမေယျ့ သဲကှဲစှာတော့မွငျနရေသညျ။မမွလေးကကိုလငျး၏ထောငျမတျထနသေော လီးတနျကွီးကို ခဏမြှကွာအောငျစိုကျကွညျ့နရေငျး ခွငျထောငျထဲသို့လူတဈကိုယျလုံး ဝငျကာ ကုတငျပျေါ တကျ လိုကျသညျ။ လီးတနျကွီးကို ကိုငျဆုပျထားသော ကိုလငျး၏ လကျမြားကို မမွလေးက သူမ၏ လကျကလေးဖွငျ့ အသာအယာလေး ဖွညျလိုကျပွီး ကိုလငျးလကျကိုဘေးဘကျသို့ညငျသာစှာ ခထြားလိုကျသညျ။
“ အိုး……နညျးတာကွီး ကိုမဟုတျဖူး…..အားရစရာကွီးပါလား….နျော……” မမွလေးက ကိုလငျးလကျကို ဖယျလိုကျစဉျတှငျမာတငျးလကျြထောငျမတျနသေော ကိုလငျး၏ လီးတနျ ကွီးကို သခြောမွငျလိုကျရသဖွငျ့ပါးစပျမှ တီးတိုးလေး အသံထှကျညညျးလိုကျရငျး သူမ၏ လကျကလေး တဈဖကျ ဖွငျ့လီးတနျကွီးကို အလယျလောကျမှ ဖမျးဆုတျကိုငျလိုကျသညျ။ ထိုအခါ မမွလေး၏ လကျဖဝါးနုနု အထိအတှေ့ ကွောငျ့ ကိုလငျး၏လီးတနျကွီးမှာ ပို၍မာတငျးပွီး ထောငျထလာသညျ။ မမွလေးမှာ သူမ၏ လကျကလေးဖွငျ့ ကိုငျလိုကျသညျတှငျ စောစောကထကျ တငျးမာတောငျထလာသော လီးတနျခြောငျးကွီးကို လကျဖဝါးလေးဖွငျ့ စုနျကာဆနျကာ ဖှဖှလေး လြှောတိုကျပှတျပေးနသေညျ။
ထို့ပွငျအားမလိုအားမရဖွဈလာဟနျဖွငျ့လညျး လီးတနျကွီးကို ဆုပျကိုငျဖဈြညှဈလိုကျမိသညျ။ ထိုသို့ ဖဈြ ညှဈလိုကျကာမှ ကိုလငျး၏လီးကွီးက ပိုပွီးကွီးလာကာ မာတောငျလာသညျ။ မမွလေးမှာ စိတျထဲ မခငျြ့မရဲဖွဈ၍ လာသဖွငျ့ လီးခြောငျးကွီးပျေါရှိ အရပွေားကို အောကျဖကျသို့ အသာလေးဆှဲခကြာ လီးထိပျဖူးကွီးကို ဖွဲကွညျ့ လိုကျရာ နီရဲလကျြတငျးကားနသေော လီးတနျထိပျဖူးကွီးက မကျမောဖှယျကောငျးလောကျအောငျထှကျပျေါလာ လသေညျ။ မမွလေး၏မကျြလုံးမြားက အရောငျတှတေဖွတျဖွတျလကျ၍လာပွီး ကိုလငျး၏လီးတနျကွီး အရပွေားကို ဆှဲခထြားသော သူမ၏လကျကလေးဆီမှ လကျမထိပျလေးဖွငျ့ ဒဈထိပျဖူးကားကားကွီးကို ထိတယျဆိုရုံလေး ထိ၍ပှတျပေးလိုကျသညျ။
ကိုလငျး၏လီးတနျကွီးမှာ မမွလေး၏လကျထဲတှငျတငျးခနဲတငျးခနဲ ဖွဈကာ ဆတျခနဲ ဆတျခနဲ ထောငျထရုနျးကနျနသေညျ။ မမွလေးက ကိုလငျးမကျြနှာကို လှမျး၍ကွညျ့လိုကျရာ မကျြလုံးလေးမြား မှိတျကာ အသကျကိုမှနျမှနျရှူနသေော ကိုလငျး၏မကျြနှာကိုခဈြစဖှယျမွငျနရေသညျ။ မမွလေးက ကိုလငျးကိုကွညျ့ပွီးသညျနှငျ့ တောငျမတျနသေော လီးကွီးကို သူမ၏ လကျတဈဖကျဖွငျ့ ဆုပျကိုငျကာ သူမ၏မကျြနှာကို လီးကွီးပျေါသို့ ငုံ့၍ခလြိုကျသညျ။
မမွလေး၏ ပခုံးသာသာလောကျရှိသော ဆံပငျ တဈခြို့တဈဝကျမှာ ကိုလငျး၏ ပေါငျခွံနှငျ့ဆီးခုံပျေါကို ထှေးခနဲဝဲ၍ကသြှားရာ ကိုလငျးမှာ ယားကြိကြိဖွငျ့တဈမြိုး အရသာ တှသှေ့ားရသညျ။ မမွလေးက ပွညျ့တငျးသော သူမ၏နှုတျခမျးလေးအစုံဖွငျ့ ကိုလငျး၏ လီးတနျကွီးထိပျဖူးကို ဖိကပျကာ လြှာဖြားလေးဖွငျ့ကလိလိုကျသညျ။ကိုလငျးမှာယောငျပွီးအသံထှကျမအျောမိအောငျစိတျကိုမနညျးခြုပျတညျးထား လိုကျရသညျ။ မမွလေးတဈယောကျသူအိပျပြျောနသေညျအထငျဖွငျ့လုပျခငျြရာလုပျပလစေ့ဟေူ၍ လှတျထားပေး ခွငျး ဖွဈသညျ။ သူ့အနဖွေငျ့နိုးသှားမညျဆိုလြှငျမမွလေးမှာရှကျရမျးရမျးသှားမှာ ကိုစိုးရိမျမိသဖွငျ့စိတျထဲမှဖွဈပျေါခံစားနရေ သမြှကို ခြုပျတညျးလိုကျရခွငျးဖွဈသညျ။
မမွလေးက သူမ၏နှုတျခမျးနှဈလှာကို အသာဟ၍ လီးတနျကွီး ဒဈ သာသာလောကျအထိ ဝငျအောငျ ပါးစပျထဲ ထိုးထညျ့လိုကျပွီး မာတငျးနသေော ဒဈကွီး၏ အောကျဖကျနားကို ဘယျညာပတျ၍ လြှာဖြားလေးဖွငျ့ ပှတျသပျဆှဲပေးလိုကျသညျ။ ကိုလငျးမှာ တောငျ့ခံနသေညျ့ကွားထဲမှ တှနျ့ခနဲ ဖွဈသှားရသေးသညျ။ မမွလေးက ကိုလငျး၏မကျြနှာဆီကို မကျြလုံးလေးအသာလှနျပွီး ကွညျ့လိုကျသျောလညျး ကိုလငျးတဈယောကျ အခုခြိနျထိ ထပျမံလှုပျရှားခွငျး မရှိသေးသဖွငျ့ လီးတနျကွီးတဈခြောငျးလုံးကို ပါးစပျထဲ ဝငျနိုငျသမြှ ဝငျအောငျသှငျးလိုကျ၊ ပွနျထုတျလိုကျဖွငျ့စိတျထကျသနျစှာ စုပျပေးနသေညျ။
ကိုလငျး၏ လီးတနျကွီးမှာလညျး မမွလေး၏ ပါးစပျထဲမှ တံတှေးမြားဖွငျ့ စိုရှဲပွောငျလကျနတေော့သညျ။ မမွလေးမှာ ခွငျထောငျကိုမလြှကျ ကုတငျပျေါမှ ပွနျဆငျးလိုကျသညျ။ ပွီးနောကျ သူမ၏ကိုယျအထကျပိုငျးမှ အကငြ်္ီနှငျ့ဘရာစီယာတို့ကို ခြှတျလိုကျပွီး ထမီကိုပါ ဆကျ၍ ဆှဲခြှတျလကျြပုံလိုကျသညျ။ ကိုလငျးမှာ မမွလေး ဘာလုပျနတောလဲဟု မကျြလုံးလေး အသာမှေး၍ဖှငျ့ကွညျ့လိုကျရာ ကုတငျဘေးတှငျ အဝတျအစားလုံးဝမရှိဘဲ ကိုယျတုံးလုံးကွီးဖွဈနသေော မမွလေး၏ အမို့၊အဝှမျး၊ အကောကျ၊ အတောငျ့တို့ကို မွငျလိုကျရသဖွငျ့ရငျထဲမှ ကာမဆန်ဒတှေ တကျကွှလို့လာရလသေညျ။
မမွလေးက ကုတငျဘေးမှာ မတျတတျရပျလကျြကိုလငျး၏ လြှောကနြသေော ပုဆိုးကို အသာအယာဖွငျ့ ဆှဲခြှတျလိုကျရာ ကိုလငျ၏အောကျပိုငျးတဈခုလုံး ဟာလာဟငျးလငျး ဖွဈသှားရတော့သညျ။မမွလေးသညျ တံ တှေးမြားဖွငျ့ စိုရှဲလကျြ မာတငျးထောငျမတျကာ တဆတျဆတျဖွဈနသေော ကိုလငျး၏ လီးတနျကွီးကို ကွညျ့၍ တံတှေးတဈခကျြ မွိုလိုကျပွီး ခွငျထောငျမကာ ကုတငျပျေါတကျလကျြတဈဆကျထဲပငျကိုလငျးကို မကျြနှာမူ၍ ကိုလငျးအပျေါသို့ကြျောခှတကျလိုကျသညျ။ ကိုလငျး၏ သံခြောငျးတမြှ မာတငျးတောငျမတျနသေော လီးတနျကွီးကို သူမလကျတဈဖကျဖွငျ့ ဆုတျကိုငျလိုကျပွီး ကုနျးကုနျးကှကှကွီးဖွငျ့ သူမ၏စောကျဖုတျအဝကို လီးထိပျဖူးအား တလေ့ကျြတဖွေးဖွေး ဆောငျ့ကွောငျ့ထိုငျခလြိုကျရငျး ကိုလငျး၏လီးကွီးကိုသူမစောကျဖုတျကွီးထဲ သှငျးယူလိုကျ တော့သညျ။
“ အား….အငျ့….အီး…အား…အ….အီး….အား…အငျ့အငျ့..” “ ပွှတျ…ပလှတျ…ပွှတျ….ဖှတျ….” မမွလေးက အပျေါမှဆောငျ့ရတာ အားရကနြေပျနသေညျ့ပုံဖွငျ့ ညညျးညူလိုကျရငျး ဖငျကွီးကိုကွှကာ ကွှကာဖွငျ့ခပျသှကျသှကျလေး ဆောငျ့၍ လိုးလတေော့သညျ။ ကိုလငျးမှာ သူ့စိတျတှကေို ဘယျလိုမှ မထိနျးနိုငျ တော့ဘဲ မကျြလုံးနှဈလုံးကို ဖွတျခနဲဖှငျ့လိုကျရာ မမွလေး၏နို့အုံကွီးတှကေ မကျြနှာရှတှေ့ငျ ဝဲနသေညျကို တှလေို့ကျရသဖွငျ့ သူ့လကျမြားဖွငျ့ နို့အုံကွီးကို လှမျးဆှဲကိုငျဆုပျလိုကျပွီး မမွလေး၏ဖငျကွီးကို အောကျသို့ ဆောငျ့အခနြှငျ့အညီသူ၏ဖငျကိုကော့ပငျ့ပေးလိုကျသညျ။
“ ဟငျ…..ကိုလငျး…နိုး နပွေီလား….” “ အငျး…ဆကျဆောငျ့…ဆောငျ့….ကိုလငျး ကောငျးနပွေီ….” “ ဖှတျ…စှပျ…ပွှတျ……….ပလှတျ…ပွှတျ…….” မမွလေးမှာ အပျေါမှနေ၍ ဖငျကိုကွှကာ ဆောငျ့လိုး၍ကောငျးနတေုနျး ကိုလငျးနိုးလာပွီး နို့အုံမြားကို ဆုပျကိုငျလိုကျသဖွငျ့လနျ့သှားရပွီး အဆောငျ့ရပျမညျပွုလိုကျရာ ကိုလငျးက နို့တှကေို ကိုငျထားသော လကျကို ဖွုတျလိုကျပွီး မမွလေး၏ တငျပါးကွီးနှဈဖကျကို ကိုငျဆုပျထားလိုကျသညျ။
မမွလေးမှာ ခဏမြှငွိမျနလေိုကျပွီး ကိုလငျးက တငျပါးနှဈဖကျကို ကိုငျဆုပျထားသဖွငျ့ ခြှတျ၍မရဖွဈနသေဖွငျ့ကိုလငျးပွောသညျ့အတိုငျးပငျဖငျကို ကွှကာကွှကာဖွငျ့ဆကျဆောငျ့ပေးလိုကျတော့သညျ။ “ ပွှတျ….ဖှတျ…စှပျ…..ပလှတျ…ပွှတျ……………” “ ကောငျးလိုကျတာ..မမွလေးရာ…အား…အ…..ကောငျးတယျ…ဆောငျ့..ဆောငျ့…..” “ ပွှတျ….ဖှတျ….စှပျ……ပလှတျ……..” မမွလေးမှာ ကိုလငျးကို စကားပွောခှငျ့ မပေးဘဲ ကိုလငျး၏နှုတျခမျးအစုံကို တပျမကျစှာဖွငျ့အတငျးငုံ၍ စုပျနမျးလိုကျသညျ။ သူမဖငျကွီးကိုလညျး ကွှကာ ကိုလငျး၏လီးတနျကွီးကို စောကျခေါငျးထဲ အဆုံးပွနျဝငျအောငျ ဆောငျ့ဆောငျ့သှငျးနမွေဲသှငျးလကျြရှိသညျ။
ကိုလငျးအနဖွေငျ့ရမ်မကျစိတျမြား ပွငျးထနျလကျြရှိနရေသလိုမမွလေး မှာလညျး ကိုလငျးနိုးမှာကို မပူရတော့သဖွငျ့ပွငျးထနျတကျကွှလာသော ကာမစိတျမြားကိုလှတျပေးလိုကျတော့ပွီး အတငျးပငျဆောငျ့ဆောငျ့ခြ လိုးပေးနတေော့သညျ။“ အိ…အ…….ပွှတျ…ဖှတျ…..ကောငျးတယျ…ကှာ….ဆောငျ့…ဆောငျ့..ပါ….အ….အီး….” သိပျမကွာခငျမှာပငျ မမွလေးမှာ စိတျတိုငျးကြ ဆောငျ့နရေသဖွငျ့အားရကနြေပျမှုမြား ဖွဈလာကာ (၃) (၄) ခကျြခနျ့ ဆောငျ့ပွီး ကိုလငျး၏လီးကွီးကို အရငျးထိဝငျအောငျဖိကပျလကျြကိုလငျး၏ကိုယျပျေါသို့ မှောကျခြ ဖိကပျလကျြ ကသြှားရာမှ သုတျရညျမြားကို အားရပါးရ ပနျးထုတျလိုကျတော့သညျ။
ကိုလငျးလညျး ပွီးလုပွီးခငျ ဖွဈနတေုနျး မမွလေး အဆောငျ့ရပျသှားပွီး လဲကလြာသဖွငျ့ မမွလေး၏ခါးကို လကျနှဈဖကျဖွငျ့ စုံကိုငျလကျြ အောကျမှနေ၍ လေးငါးခကျြပဈဆောငျ့လိုကျရာ လီးတနျကွီးတဈခုလုံး ဆိမျ့ကငျြသှားပွီး သုတျရညျမြားကိုမမွလေး ၏ စောကျခေါငျးထဲ တပွှတျပွှတျပနျးထညျ့လိုကျသညျ။ ကိုလငျးက သူ၏ကိုယျပျေါမှောကျကလြာသော မမွလေး၏ကိုယျလုံးကွီးကိုသိုငျးဖကျထားလိုကျလသေညျ။ မမွလေးမှာ စောစောက ကာမဆန်ဒတှေ တကျကွှလှနျး၍ ကိုလငျးအပျေါမှတကျခှဆောငျ့လိုးခဲ့သျောလညျး ယခုအခါ ပွီးသှားပွီဖွဈသဖွငျ့ကာမဆန်ဒတှလေညျး ပွပြေောကျသှားခြိနျတှငျမတော့ကိုလငျးအပျေါ ရှကျစိတျမြား ပျေါလာပွီး မကျြနှာလေး နီမွနျးလကျြရှိနလေသေညျ။
“ မွလေး…” “ ဟငျ…ရှငျ…ကိုလငျး…” “ ကောငျးတယျမို့လား…ဟငျ….” “ အို…….ကိုလငျးကလဲ…မွလေး ရှကျပါတယျ…မမေးပါနဲ့….” “အျော…မွလေးရယျ… မရှကျပါ့နဲ့တော.. အခုဆို ကိုလငျးနဲ့ မွလေးတို့ အားရပါးရ လိုးပွီးနကွေမှပဲဟာ… ရှကျဖို့လိုသေးလို့လား…” “ ကိုလငျးကလဲ..မွလေးရှကျတာပေါ့လို့… ကိုလငျးကို မွလေးက အရငျစပွီးတော့ လိုးခဲ့တာလေ…မွလေး ရှကျလိုကျတာ…” “ မွလေးရယျ… ကိုလငျးလဲလေ.. မွလေးနဲ့ အခုကွုံလို့ပါ… မွလေး တို့အိမျစရောကျကထဲက မွလေးရဲ့ တငျပါးဆုံကွီးနဲ့နို့ကွီးတှကေို မွငျပွီး လိုးခငျြနခေဲ့တာပါ…” “ မွလေး..သိသားပဲ…ကိုလငျးဖွဈနတောတှကေို… ဒါပမေယျ့..မွလေး အခုလို စပွီးလိုးတာမို့ မွလေးကို အထငျမသေးရဘူး..နျော….”
“ အထငျမသေးပါဘူး.. မွလေးရဲ့.. မွလေးကို အထငျမသေးတဲ့အပွငျမွလေးကို အရမျးခဈြသှားရပါသေး တယျ.. တကယျ..ပါ.. မွလေးကိုသိပျခဈြတာပဲ…ကှယျ..” “ တကယျနျော..ကိုလငျး… ပွီးတော့ ဟို…ဟိုလေ…မွလေးတို့ ဒီအိမျကိုစရောကျတုနျးကတညျးက ကိုလငျး မွလေးကိုကွညျ့တဲ့အကွညျ့တှထေဲမှာ မွလေးကိုလုပျခငျြတဲ့ဆန်ဒတှေ ပွငျးပွနမှေနျး မွလေး သိတယျ.. နောကျပွီး… မွလေးတို့ည ည လိုးကွတဲ့အခါလညျး ကိုလငျးခြောငျးကွညျ့နမှေနျးလဲ မွလေး သိတယျ… သိလား…” “ ဟငျ…ကိုလငျးခြောငျးကွညျ့တာ မွလေး သိတယျ.. ဟုတျလား…” “အငျး…သိတာပေါ့…ကိုလငျးရဲ့..ကိုလငျးမွလေးတို့ကိုခြောငျးဖို့အပေါကျ ဘယျနှပေါကျဖောကျထားတယျ. ဆိုတာ ပွောပွရအုံးမလား…”
“ ဟာကှာ…တကယျပါပဲ..မွလေးကတော့အကုနျသိနတောကိုး…” “ သိရုံတငျမကဘူး… ည ညဆိုကိုစိုးနဲ့မွလေးတို့လိုးကွတာကိုကွညျ့ပွီး ကိုလငျး မနနေိုငျတော့လို့ဂှငျးတိုကျ နတောလဲ သိလို့မွလေး သနားတာနဲ့အခုလို ကွံပဈလိုကျတာ..” “ အျော…မွလေး…အခဈြရယျ… ” “ အျော..ဒါနဲ့ကိုစိုးမွငျ့ခရီးသှားတာ မွလေး မလိုကျသှားဘူးလား…” “ ကိုစိုးက နပွေညျတျောသှားတာဆိုတော့ ကွာမှာလေ ကိုလငျးရဲ့.. အနညျးဆုံး သုံးလေးရကျတော့ ကွာ မယျ.. မွလေးလဲ အစကတော့ လိုကျသှားအုံးမလို့ဟာ…ပဲ.. ဒါပမေယျ့ ကိုလငျးတဈယောကျတညျး ကနျြနခေဲ့မှာ သနားလို့…လိုကျမသှားတော့တာ…” “ ဒီလောကျတောငျပဲလား…မွလေးရယျ…” “ ဒီထကျတောငျပိုသေးတယျ..ရှငျ့…သိရဲ့လား..ဟှနျ့……” ကိုလငျးက မမွလေး၏ ကိုယျလုံးအား ဖကျထားရငျးစကားပွောနကွေခွငျးဖွဈသညျ။
မမွလေး၏ စောကျဖုတျ ထဲတှငျကိုလငျး၏လီးတနျကွီး တပျလကျြတနျးလနျးဖွငျ့ကိုယျပျေါတှငျမှောကျထားသော မမွလေးကို စကားပွော နခွေငျးဖွဈရာ ပထမဦးစှာ ရှကျနသေော မမွလေးမှာ အခုဆိုလငျြရှကျစိတျမြား ကှယျပြောကျသှားပွီ ဖွဈသညျ။ ကိုလငျးက မမွလေး၏ ကြောပွငျကို ဖကျထားသော လကျမြားအား အငွိမျမနဘေဲ ပှတျသပျလှုပျရှားပေးနသေညျ။ မမွလွေး၏ စောကျဖုတျထဲတှငျဝငျနသေော လီးတနျကွီးကလညျး မမွလေး၏ စောကျခေါငျးနံရံမြားနှငျ့ထိတှမှေု့ ကွောငျ့ပွနျလညျမာကြောလာပွီဖွဈသညျ။ မမွလေး၏ နို့အုံကွီးကလညျး ကိုလငျး၏ ရငျဘတျပျေါတှငျဖိထားသဖွငျ့နို့အုံကွီး၏ အထိအတှကေလညျး ကိုလငျး၏ ရမ်မကျစိတျမြားကို နှိုးဆှပေးနသေညျ။
မမွလေးမှာလညျး စကားပွောနရေငျးမှနေ၍ ရှကျစိတျမြား ကှယျ ပြောကျကုနျပွီ။ ကိုလငျး၏ သနားစဖှယျအမူအရာနှငျ့သူမကို လိုးခငျြစိတျမြား အမွဲဖွဈပျေါနတေတျသညျကိုလညျး သိပွီးဖွဈသဖွငျ့ယခုလိုအစပြိုးပွီးလိုးဖွဈကွရာ နောကျထပျ၍လိုးကွရနျဆန်ဒမြား ဖွဈပျေါနကွေလသေညျ။ သူမ၏ စောကျဖုတျထဲ တပျလကျြသားကွီး ဖွဈနသေေးသော ကိုလငျး၏ လီးတနျကွီးမှာလညျး တဖွညျးဖွညျး မာလာ သောအထိအတှေ့ ခံစားမှုကွောငျ့ကိုလငျး၏အလိုးကိုတဖနျပွနျ၍ ခံခငျြလာသော ကာမရမ်မကျတို့ကလညျး ဖွဈပျေါ လာသညျ။
“ ကိုလငျး…..” “ ဟငျ…ဘာလဲ…မွလေး…” “ ဟိုလေ…. မွလေးကို ကွညျ့ပွီး ကိုလငျး လိုးခငျြနတေယျ…မဟုတျလား…” “ လိုးခငျြတာမှ..တပိုငျးသနေတောပေါ့…မွလေး…ရယျ….” “ နောကျပွီး ခြောငျးကွညျ့တိုငျး တှရေ့တဲ့ မွလေးရဲ့ စောကျဖုတျဖောငျးဖောငျးအိအိကွီးကလဲ ကိုလငျးကို လိုးခငျြစိတျတှေ တဖှားဖှား ပျေါစတေယျလေ….” “ ဒါကွောငျ့မွလေးက ကိုလငျးလိုးရအောငျကွံဖနျပေးတာပေါ့…” “ ကဲ…ဒါဆို….” “ ဒါဆိုရငျ…ဘာဖွဈလဲ…ကိုလငျးရဲ့…” “ ကိုလငျးတို့တဈခြီလောကျထပျပွီး လိုးကွရအောငျ…” “ ကိုလငျးသဘောပါ…မွလေးလေ… ကိုလငျး ဘယျလောကျလိုးလိုး အလိုးခံဘို့အသငျ့ပါပဲ…ရှငျ…” “ ဒါဖွငျ့…ခဏကွှအုံး…ကိုလငျးပွမယျ…” “ ပွှတျ…..” မမွလေးက ကိုလငျးအပျေါ မှောကျခထြားရာမှ ကွှပွီးထလိုကျရာ ကိုလငျး၏ လီးတနျကွီးမှာ သူမ စောကျ ဖုတျထဲမှ ပွှတျခနဲ ကြှတျထှကျသှားလသေညျ။
ပွီးနောကျကိုလငျးဘေးတှငျယှဉျလကျြမမွလေးက လှဲအိပျလိုကျ သညျ။ မမွလေး၏ နို့အုံထှားထှားအိအိကွီးမြားနှငျ့အတူလှပသော ကိုယျလုံးဖှေးဖှေးကွီးကို ကွညျ့၍ ကိုလငျး လီး တနျကွီးမှာ တဆတျဆတျဖွငျ့တောငျမတျလာသညျ။ကိုလငျးက မမွလေး၏ ပွညျ့ဖွိုးတငျးမာနသေော နို့မြားကို လကျတဈဖကျနှငျ့ဖှဖှရှရှလေး ပှတျသပျလိုကျပွီး နို့အုံတဈလုံးကို ပါးစပျနှငျ့ငုံကာ တပွှတျပွှတျနအေောငျစို့လိုကျ သညျ။ နို့အုံတဈလုံးကိုငုံစို့လိုကျပွီး နို့သီးခေါငျးလေးကိုသှားဖွငျ့မနာတနာလေး ကိုကျပေးသညျ။
မမွလေး၏ ပေါငျ တှငျးသား တလြှောကျကိုလညျးလကျတဈဖကျဖွငျ့ပှတျသပျဆုပျခပြေေးလိုကျသညျ။ ထိုမှတဆငျ့မို့ဖောငျးပွညျ့တငျး နသေောစောကျဖုတျအကှဲကွောငျးတလြှောကျကိုလကျဖွငျ့ပှတျပေးလိုကျပွီးစောကျစလေ့ေးကိုပါပှတျခွပေေးလိုကျ သညျ။ “ အငျး…ဟငျး….ဟငျး…ကိုလငျး ရယျ…” မမွလေးတဈယောကျတဒင်ျဂငုတျလြှိုးသှားသော ကာမဆန်ဒတှေ တရိပျရိပျပွနျတကျလာရ၍ ညညျးညူလိုကျ မိသညျ။ ကိုလငျးက မမွလေး၏ အသားဆိုငျမြားကို ပှတျသပျခမြှေပေးပွီး မမွလေး၏ နှုတျခမျးလေးကို သူ့နှုတျခမျး နှေးနှေးဖွငျ့ ဖိကပျစုပျနမျးလိုကျရာ ကိုလငျး၏ကြောပွငျကွီးကို မမွလေး လကျလေးမြားဖွငျ့ အတငျးဖကျတှယျ လိုကျသညျ။
မမွလေးမှာ စောကျခေါငျးတလြှောကျ ရှစိရှစိဖွဈလာပွီး စောကျရညျမြား ထှကျလာရပွီဖွဈသညျ။ ကိုလငျး၏ နှုတျခမျးမြားကိုစုပျနမျးရငျး နို့တှကေိုပှတျသပျခမြှေနမှေုကွောငျ့မမွလေးမှာ ခါးကိုကော့ပဈလိုကျမိသညျ။ “ ဟငျး ဟငျး… ကိုလငျးရယျ.. မွလေး မနတေတျတော့ဘူး.. ကှယျ… အား.. အီး…လုပျမှာဖွငျ့လဲ လုပျပါတော့ ရှငျရယျ…” မမွလေးမှာ တကျကွှလာသော ကာမစိတျမြားကွောငျ့ မအောငျ့နိုငျတော့ဘဲ ကိုလငျးကို လိုးဖို့ ပါးစပျမှ ထုတျပွောလိုကျရတော့သညျ။ကိုလငျးက မမွလေးကိုယျပျေါမှ ထလိုကျပွီး မမွလေး၏ ပေါငျနှဈခြောငျးကွား ဝငျထိုငျလြှကျ သူ၏ပေါငျနှဈဖကျပျေါကို မမွလေး၏ ပေါငျနှဈလုံးအား တဈဖကျတဈခကျြစီ ဆှဲတငျလိုကျ သညျ။
မမွလေး၏ ဟပွဲလာသော စောကျခေါငျးပေါကျဝသို့ ကိုလငျးက သူ့လီးတနျကွီးဖွငျ့ တပွေီ့း စောကျဖုတျ အကှဲကွောငျး တလြှောကျလီးတနျကွီး ထိပျဖွငျ့မှဆှေကလိပေးလိုကျသညျ။ မမွလေး၏ စောကျစိလေးကိုလညျး သူ၏ လီးဒဈကွီးဖွငျ့ဆတျခနဲဆတျခနဲ ထိုးပေးလိုကျပွနျသညျ။ “ ဟငျ့ဟငျ့…ကိုလငျးရယျ.. အား….အီး…လိုးပါတော့…လို့…ဆို….” “ အငျး…လိုးတော့မယျ…နျော…မွလေး..” “ လိုးပါ ..ကိုလငျးရယျ.. မွလေး စောကျဖုတျထဲ ကိုလငျးလီးကွီးနဲ့လိုးသှငျးလိုကျပါတော့…မွလေး မနနေိုငျ တော့ဘူး….အီး…အ……..” “ ပွှတျ….ဗွဈ……..” ကိုလငျးက လိုးမညျဟုပွောပွီးသျောလညျး မမွလေး၏ စောကျခေါငျးဝတဲ လီးတနျထိပျဖူးကွီး ဝငျအောငျ ပွှတျခနဲသှငျးလိုကျကာ ဆကျပွီး မသှငျးသေးဘဲ တနျးလနျးထားလကျြမမွလေး၏ နို့အုံကွီးတှကေို ဆုပျနယျနေ လိုကျသညျ။
မမွလေးမှာ ကွှနရှေနပွေီ ဖွဈသဖွငျ့ ဘယျလိုမှ မနနေိုငျတော့လောကျအောငျ ဖွဈလာသောကွောငျ့ လီးတနျကွီးကို လကျတဈဖကျဖွငျ့ ကိုငျဆှဲလကျြ စောကျခေါငျးထဲ ဆှဲသှငျးလိုကျရငျး သူမ၏စောကျဖုတျကွီးကို ကော့ပွီး ပငျ့တငျပေးလိုကျရာ လီးတနျကွီး တဈဝကျသာသာလောကျစောကျခေါငျးထဲ တိုးဝငျသှားသညျ။ မမွလေးက ကိုလငျး၏ လီးတနျကွီးကိုကိုငျထားသော လကျကလေးကိုဖယျလိုကျပွီး ကိုလငျး တငျပါးနှဈဖကျ ကိုလကျနှဈဖကျဖွငျ့ဆုပျကိုငျဆှဲခပြွီး သူမဖငျကွီးကိုလညျးထပျမံကော့တငျပဈလိုကျရာလီးတနျကွီးတဈခြောငျးလုံး သူမ၏ စောကျဖုတျထဲသို့အဆုံးတိုငျဝငျသှားလတေော့သညျ။ ပွီးပါပွီ။
ပွမ်….ပွမ်….” “ လာပြီ….လာပြီ..” “ ကျွီ……….” အိမ်ရှေ့မှ ကားဟွန်းသံကြားရပြီး မမြလေး၏ အသံနှင့်အတူလမ်းလျှောက်သွားသံ၊ အိမ်တံခါးဖွင့်သံတို့ကို တစ်ဆက်တည်း ကြားလိုက်ရသဖြင့် အိပ်မောကျနေသော ကိုလင်းတစ်ယောက် အိပ်ရာမှ လန့်နိုးသွားရသည်။ ဘာတွေ လုပ်နေကြသလဲ သိချင်သဖြင့်အိပ်ခန်းတံခါးကို အသာဟ၍ ကြည့်လိုက်ရာ အထုပ်အပိုးများနှင့်အိမ်ရှေ့ ထွက်သွားသော ကိုစိုးမြင့်တို့လင်မယားကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ရသောကြောင့်တံခါးကိုအသာပြန်စေ့ထားလိုက်သည်။
ညက ကိုလင်းတစ်ယောက်အတော်ညဥ့်နက်မှ အိမ်ပြန်ရောက်သဖြင့်ကိုစိုးမြင့်နှင့်မမြလေးတို့လင်မယား နှစ်ယောက် ယခုကဲ့သို့ ခရီးသွားမည်ဆိုတာ မသိလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ကိုလင်းရင်ထဲမှာ ဝမ်းနည်းသလိုလို ဖြစ်သွားရပြီး ဟာတာတာ၊ ဆာတာတာ ဖြစ်နေရသည်။ ကိုစိုးမြင့်နှင့်မမြလေးတို့ လင်မယားကို ကြည့်ပြီး မနာလို ဝန်တိုစိတ်များကလည်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့သည်။ကိုလင်းအနေဖြင့်သူ၏စိတ်ထဲမှဤသို့ဤပုံဖြစ်နေသည်များကိုကား ကိုစိုးမြင့်တို့လင်မယားအနေဖြင့်သိချင်မှ သိပေလိမ့်မည်။ ယခုကဲ့သို့ကိုစိုးမြင့်တို့လင်မယား အတူသွားအတူလာ၊ အတူစား အတူအိပ်ကြသည်ကို ကြည့်မိတွေးမိတိုင်း ကိုလင်းရင်ထဲမှာ သဝန်တိုစိတ်၊ ဝမ်းနည်းစိတ်၊ ယူကျုံးမရစိတ်၊ နှမျောတသ စိတ်များ အမြဲတမ်းဖြစ်မိရသည်။
ဘယ်သူ့ကိုတိုင်တည်ပြီး၊ ဘယ်သူ့ကိုပြောလို့ဘယ်သူ့ကိုအပြစ်ပုံချရမည်ဆိုတာတော့ကိုလင်မဝေခွဲနိုင် ဖြစ်ရသည်။ ကိုလင်းစဉ်းစားနေသည့် အချိန်တွင်အိမ်ရှေ့မှ ကားထွက်သွားသံကို ကြားလိုက်ရသည်။ ကိုလင်းမှာ အိပ်ရာပေါ် ပက်လက်လှန်လျက် ပြန်လှဲနေလိုက်ပြီး နဖူးပေါ် လက်တင်လျက် စဉ်းစားခန်း ဝင်နေလိုက်သည်။ ကိုလင်းနှင့် ကိုစိုးမြင့်တို့က ငယ်ငယ်ကတည်းက အတူတတွဲတွဲ နေခဲ့ကြသည့် ငယ်သူငယ်ချင်းများ ဖြစ်သည်။ ဆယ်တန်းအောင်ပြီး အလုပ်များ ဝင်ကြချိန်တွင်မတော့ကိုစိုးမြင့်က စိုက်ပျိုးရေးရုံးမှာ အလုပ်ဝင်ခဲ့သည်။ ကိုလင်းက တရားရုံးမှာ အလုပ်ဝင်ပြီး စာရေးအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သည်။ ကိုလင်းက အိမ်ထောင်မရှိသော လူပျိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ကိုစိုးမြင့်ကတော့ လွန်ခဲ့သော တစ်လခန့်ကမှ အိမ်ထောင်ကျသည်။ ဘဏ်ရုံးတွင် အလုပ်လုပ်နေသော မမြလေးနှင့်ဖြစ်သည်။ကိုစိုးမြင့်နှင့်မမြလေးတို့အိမ်ထောင်ကျချိန်တွင်နေထိုင်စရာအိမ်ကအဆင်သင့်မရှိသေးသည့် အတွက်ကိုလင်းအိမ်တွင်လာရောက်နေထိုင်သည်။ ကိုလင်းကလည်း သူငယ်ချင်းအရင်းကြီးဖြစ်၍ ကိုစိုးမြင့်တို့ လင်မယားအတွက် လိုအပ်သော အကူအညီများ ပေးသည့်အနေဖြင့် အိမ်ပေါ်ခေါ်တင် ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုစိုးမြင့်တို့လင်မယားလည်း ကိုလင်းအိမ်မှာ သဘောကျ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။
ကိုလင်းအိမ်မှာ မိဘများက အမွေပေးထားခဲ့သော အိမ်ဖြစ်ပြီး ၂၅ ပေ . ၆၀ ပေ ရှိခြံဝင်းကလေးထဲတွင် ပေ ၂၀ . ၄၀ ၊ ၃ ပင်နှစ်ခန်း တစ်ထပ်ပျဉ်ထောင်အိမ်ကလေးကိုဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ထပ်ပျဉ်ထောင် အိမ်ကလေးကိုအစပထမက ကိုလင်းတစ်ယောက်တည်း နေထိုင်သဖြင့်ဖြစ်သလိုပင်နေခဲ့သော်လည်း ကိုစိုးမြင့်တို့ လင်မယား အိမ်မှာ လာနေမည်ဆိုတော့အိမ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်မွမ်းမံခဲ့ရသည်။ အိမ်ရှေ့ခန်းနှင့်ဘုရားခန်းကိုတစ်ဆက်တည်း ထားပြီး၊ အိပ်ခန်းနှစ်ခန်းကိုသုံးထပ်သား နံရံဖြင့်ခန်းစီးကာရံ ဖွဲ့ထားလိုက်သည်။ နောက်ဖက်တွင်မီးဖိုခန်းကလေး ထားလိုက်သည်။
ကိုလင်းမှာ ယခင်က ထမင်းကိုဆိုင်မှာပဲ စားခဲ့သော်လည်း ကိုစိုးမြင့်တို့လင်မယား ရောက်လာပြီး နောက်တွင်တော့ မမြလေး လက်ရာကို စားခဲ့သည်။ မမြလေးမှာ အိမ်မှုကိစ္စနိုင်နင်းသလို အချက်အပြုတ်လည်း ကျွမ်းကျင်သည်။ ရုံးသမားများမို့မနက်ဖက်ထမင်းချက်ကာ ထမင်းချိုင့်ကိုယ်စီထည့်ပေးသည်။ ညနေဆိုရင်တော့ သုံးယောက်ပေါင်း အတူတူထမင်းစားကြသည်။ ညဖက်ဆိုလျှင်ကိုလင်း အခန်းထဲဝင်ပြီး ရုံးအလုပ်တွေ လုပ်လေ့ရှိသည်။ ကိုလင်းအနေဖြင့်အခန်းနံရံများကို အပေါက်များ ဖောက်ပြီးပြီဆိုကတည်းက အိပ်ခန်းထဲ စောစောဝင်လေတော့သည်။ ကိုလင်း အိပ်ခန်းထဲ စောစောဝင် မှသာလျှင်ကိုစိုးမြင့်နှင့်မမြလေးတို့လင်မယားမှာ စောစောအလုပ်ဖြစ်ကြမည်မဟုတ်လား။
အပေါက်မဖောက်ခင် အချိန်တုန်းကတော့ကိုစိုးမြင့်တို့လင်မယား၏ လိင်ဆက်ဆံကြပုံများကိုအသံဖြင့်သာ ကြားရသည်ဖြစ်၍ ကိုလင်းမှာ အားမရနိုင်ပဲ ဒုက္ခတွေ့နေရသည်။ အပေါက်များ ဖောက်ပြီးချိန်တွင်မတော့ တစ်မျိုးဒုက္ခရောက်ရပြန်သည်။ ကိုစိုးမြင့်နှင့်မမြလေးတို့ လိုးကြ ဆော်ကြသည်ကိုတွေ့မြင်နေရသဖြင့်ကိုစိုးမြင့်နှင့်မမြလေးတို့၏ ဝတ်လစ်စလစ်ကိုယ်လုံးများ၊ မမြလေး၏ နို့အုံကြီး များ၊ မမြလေး၏ စောက်ဖုတ်ကြီး၊ တင်ပါးဆုံပြောင်ဝင်းအိအိကြီးများကို တွေ့မြင်ရပြီး မမြလေးကို လိုးချင်စိတ်တွေ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ တဖွားဖွား ပေါ်ပေါက်လာနေရသည်။မမြလေးကိုမှန်းပြီး မိမိဖာသာမိမိဂွင်းတိုက်ပြီး အကြောဖြေ ရတာ ညတိုင်းလိုလိုပင် ဖြစ်လာသည်။ မဖြစ်လို့ကလည်း ရမှမရတာလေ။
ကိုစိုးမြင့်နှင့်မမြလေးတို့မှာ ညားခါစ ဖြစ်သဖြင့်ညတိုင်းလိုလိုပင်လိုးကြဆော်ကြတာကို မြင်တွေ့နေရ၍ ဖြစ်တော့သည်။ ညတုန်းကလည်း ကြည့်လေ။ ကိုလင်းတစ်ယောက်အလုပ်ကိစ္စတစ်ခုရှိ၍ ည ကိုးနာရီကျော်ကျော်မှအိမ်ပြန် ရောက်လာသည်။ကိုစိုးမြင့်နှင့်မမြလေးတို့မှာ အိမ်ရှေ့ခန်းတွင်တီဗွီကြည့်နေကြသည်။ကိုလင်းမှာ အိမ်ရှေ့ခန်းတွင် ကိုစိုးမြင့်နှင့်ခဏစကားထိုင်ပြောပြီး အိပ်ခန်းထဲဝင်ကာ မီးပိတ်ပြီး ခုတင်ပေါ် လှဲလိုက်သည်။ ထိုအချိန်မှာပဲ ကိုစိုးမြင့် တို့လင်မယားမှာ တီဗွီပိတ်၍ အိပ်ရာဝင်လာကြသည်။ ထုံးစံအတိုင်းပင်လိုးကြဆော်ကြတော့မည်ဆိုတာ သိပြီးဖြစ် သဖြင့်ကိုလင်းက အပေါက်ဖွင့်ပြီး ချောင်းကြည့်နေသည်။
“ မြလေးရေ….. ကိုယ်တို့လိုးကြရအောင်…” “ ဟင်း…..တော်တော်ထနေတယ်….” “ ဟုတ်ဖူးလေ….မြလေးကလဲ…. ကိုစိုးက လိုးချင်လွန်းလို့ပြောတာပါ.. မြလေးက မခံချင်ဘူးလား…” “ ဘွာတေး….ဘွာတေး….. မြလေးက ကိုစိုးကိုချစ်လို့စတာပါ…ဟိုဖက်ခန်းက ကိုလင်းတောင်အိပ်သေးရဲ့ လား လို့………” “ ခပ်စောစောကပဲ ဝင်သွားတာ…အိပ်ရောပေါ့မြလေးရာ…လာပါ…လိုးကြရအောင်…” ကိုစိုးမြင့်နှင့်မမြလေးတို့မှာ အိပ်ခန်းထဲ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့်ဝင်လာပြီး ပြောနေကြခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုစိုးမြင့် ပြောသမျှကို မမြလေးက ပြန်ပြောရင်း တစ်ချက်တစ်ချက်တွင်ကိုလင်းချောင်းကြည့်နေသော အပေါက်ဆီကိုလှမ်း လှမ်းကြည့်သည်ကို အပေါက်မှ ချောင်းကြည့်နေသော ကိုလင်း သတိထားမိလာသည်။
ကိုလင်းမှာ ချောင်းကြည့် နေရတာကိုစိတ်ထဲမလုံသလိုခံစားလာရသဖြင့်ဆက်မကြည့်တော့ပဲ အိပ်ရာထဲ ပြန်လှဲအိပ်လိုက်သည်။ ကိုလင်းရင်ထဲတွင်လည်း တစ်ဖက်ခန်းကိုချောင်းကြည့်နေတဲ့အပေါက်ကိုမမြလေးက ရှာဖွေတွေ့သွားတာ ဖြစ်ပြီး သူတို့လိုးနေတုန်း ကိုလင်းချောင်းကြည့်နေသည်ကို မမြလေး ရိပ်မိသွားမည်ကို စိုးရိမ်မိသည်။ ကိုစိုးမြင့်က တော့ ဘာမှသိမည်မဟုတ်သော်လည်း မမြလေး၏ မျက်လုံးထဲတွင်သူကြည့်နေသော အပေါက်ဆီသို့ ကြည့်ရင်း သူကြည့်နေမှန်းသိသော အရိပ်အယောင်များ ပါဝင်နေကြောင်း ကိုလင်းခံစားမိသည်။
“ အ…အဟင်း….ဟင်း….ကိုစိုးရယ်…. ယားတယ်…ကွယ်….ဟင့်….ဟင်း…” တစ်ဖက်ခန်းမှမမြလေး၏ ညည်းညူသံကို ကြားရသဖြင့်ကိုလင်း မနေနိုင်တော့ပဲ ထပြီး ချောင်းကြည့်မိပြန် သည်။ ကုတင်ပေါ်တွင်မမြလေးကိုကန့်လန့်ဖြတ်အိပ်လျက်တွေ့ရပြီး မမြလေး၏ ဖင်ကြီးတွေက ကုတင်စောင်းတွင် တင်နေသည်။ ကိုစိုးမြင့်ရော မမြလေးပါ အဝတ်အစားဟူ၍ လုံးဝမရှိဘဲ ကိုယ်လုံးတီးများဖြင့်ဖြစ်နေသည်ကိုအခန်း အလယ်တွင်ထွန်းထားသော နှစ်ပေမီးချောင်း အလင်းရောင်ဖြင့်ကိုလင်းတွေ့လိုက်ရသည်။ ကိုလင်းအနေဖြင့်တစ်ခုအဆင်ပြေတာက ကိုစိုးမြင့်တို့လင်မယား လိုးကြဆော်ကြလျှင်နှစ်ပေမီးချောင်းကို အမြဲတမ်း ထွန်းထားသည်ဖြစ်သဖြင့်ကိုစိုးမြင့်တို့၏ လိုးပွဲကို ကောင်းကောင်း မြင်နေရစမြဲ ဖြစ်လေသည်။
ကိုစိုးမြင့် က မမြလေး၏ ကိုယ်ပေါ်မှ အုပ်မိုးလျက် မမြလေး၏ နို့နှစ်လုံးကို ကိုင်တွယ်ဆုပ်နယ်ပေးနေသလို မမြလေး၏ ပြည့်တင်းဖောင်းကားနေသော စောက်ဖုတ်ကလေးကို လက်ဖြင့်ပွတ်သပ်ပေးနေရာမှ လက်ညှိုးဖြင့်ထိုးမွှေကလိ ပေးနေလေသည်။ မမြလေး၏ စောက်ခေါင်းထဲမှစောက်ရည်ကြည်များ တစိမ့်စိမ့်ထွက်ကျနေသဖြင့်ကိုစိုးမြင့်က လက်ညှိုးဖြင့် ထိုးမွှေချိန်တွင်တစွပ်စွပ်အသံများ မြည်နေသည်ကို အတိုင်းသား ကြားနေရသည်။ ကိုစိုးမြင့်က မမြလေးကို နှိုးဆွ ပေးပြီး သောအခါတွင်ကုတင်စောင်း၌ တွဲလောင်းလေးဖြစ်နေသော မမြလေး၏ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဆွဲ၍ဖြဲကာ သူ၏ ၇ လက်မကျော်လောက်ထွားကြိုင်းသန်မာလှသော လီးတန်ကြီးကိုလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကိုင်၍ မမြလေး၏ ပြဲအာလာ သော စောက်ဖုတ်အဝတွင် တေ့လိုက်သည်။
ပြီးနောက် မမြလေး၏ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို လက်များဖြင့် ဆွဲကိုင်ပြီး လီးတန်ကြီးကိုထိုးသွင်းလိုက်သည်။ “ စွပ်….ဒုတ်……” “ အား…အား….အင်း….အင့်…. ကိုစိုးရယ်…..အာ…..အ..ဟင့်…” အရည်ကြည်များဖြင့်စိုစွတ်လိမ်းကျံနေသော မမြလေး၏ စောက်ခေါင်းအတွင်းသို့ကိုစိုးမြင့်၏ လီးတန်ကြီး တစ်ချောင်းလုံး အရင်းထိတဆုံးဝင်ရောက်သွားပါသည်။ မမြ လေးမှာ တစ်ချက်မျှ တွန့်သွားပြီး အားခနဲ အသံထွက်၍ ညည်းညူလိုက်သော်လည်းမမြလေး၏အသံကအားရကျေနပ်မှုတွေ အပြည့်ပါဝင်နေသည်။ကိုစိုးမြင့်ကမမြလေး၏ ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကိုင်လျှက် လီးတန်ကြီးကို ဆွဲနှုတ်ကာ ပြန်ဆောင့်သွင်းလိုက်သည်။ ဆက်ပြီး လီးတန်ကြီးကို ပြန်ထုတ်၊ ထိုးသွင်း လုပ်ကာ ဆောင့်လိုးနေသည်မှာ တဖြည်းဖြည်းနှင့်မြန်ဆန်သွက်လက်လာတော့သည်။
“ စွပ်…..ပြွတ်…..ပလွတ်….စွပ်……ပြွတ်….” ကိုစိုးမြင့်၏ လီးတန်ကြီးမှာ မမြလေး၏ စောက်ခေါင်းထဲ ဝင်သွားသောအခါ စွပ်ခနဲ ပြွတ်ခနဲ မြည်သွားပြီး ကိုစိုးမြင့်၏ တွဲကျနေသော လီးပြွတ်ဥကြီးကလည်း မမြလေး၏ စအိုဝကိုဖတ်ခနဲ ဖတ်ခနဲ သွားရိုက်မိပြီး အသံတို့မှာ စည်းချက်ကျကျပင်ထွက်ပေါ်နေတော့သည်။ မမြလေးမှာ ကိုစိုးမြင့်၏ လိုးဆောင့်ချက်နှင့်အတူ အားမလိုအားမရ ဖြစ်လာရဟန်ဖြင့် အောက်မှနေ၍ ဖင်ကြီးများကို ကော့မြှောက်ပင့်တင်ပေးနေတော့သည်။ ကိုစိုးမြင့်သည်မမြလေး၏ လုံးကျစ်ပြည့်ဖြိုးနေသော နို့ နှစ်လုံးကို စုံကိုင်ပြီး ဖိဆောင့်နေသည်။ ကိုလင်းကြည့်နေသော အပေါက်မှာ ကိုစိုးမြင့်တို့ လိုးနေသော နေရာကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရသည်ဖြစ်ရာကိုစိုးမြင့်၏လီးကြီးဆောင့်လိုးလိုက်သည့်အခါမမြလေး၏စောက်ဖုတ်လေး ခွက်ဝင်သွားသည်ကိုတောင်တွေ့မြင်နေရသည်။
“ ဆောင့်…ဆောင့်….ကောင်းလာပြီး…ကိုစိုးရဲ့…အား…….အင့်..ကောင်းတယ်..” “ စွပ်…ဖွတ်….ပြွတ်….ဖတ်……စွပ်…..” “ ကိုစိုးလည်း…..ကောင်းလာပြီ……အား….သိပ်ကောင်းတာပဲ…..တအားဆောင့်တော့မယ်…နော်…” “ စွပ်….ပြွတ်……ဖွတ်…..ဖတ်…” “ ဆောင့်ပါ….အား….အီး…ဆောင့်ပါ……အားမနာနဲ့…ဆောင့်သာဆောင့်….အ…အိ…မညှာနဲ့…ဆောင့်” “ စွပ်…..ပြွတ်…..ဖတ်…….ဖွတ်….ဖတ်…စွပ်…..” မမြလေးက အတတ်နိုင်ဆုံး ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့တင်ပေးရင်း အသံထွက်ညည်းညူလာသလို ကိုစိုမြင့် ကလည်းခြေဖျားထောက်ကာအားစိုက်ဆောင့်လိုးပေးသည်။
မကြာခင်မှာပင်မမြလေး၏ကိုယ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးတောင့် တင်း၍ မေးဖျားလေးများ ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ မော့၍ မော့၍ တက်သွားချိန်မှာ ကိုစိုးမြင့်ကလည်း ပါးစပ်ကြီးဟလျက် လီးတန်ကြီးအား မမြလေး စောက်ဖုတ်ကြီးထဲ အရင်းထိထိုးသွင်းကပ်လိုက်ရင်း ငြိမ်ကျသွားရတော့သည်။ ကိုလင်းမှာလည်း ချောင်းကြည့်နေရင်း ထောင်၍ မာတင်းလာသောသူ့လီးကြီးကိုပုဆိုးအတွင်းမှထုတ်လျက် ဂွင်းတိုက်ပစ်လိုက်ရာ သုတ်ရည်များ ပန်းထွက်သွားလေတော့သည်။ ဤသည်မှာ ကိုလင်းအနေဖြင့်အိပ်ရာပေါ်တွင် လှဲနေရင်း ညက ကိုစိုးမြင့်တို့လင်မယား လိုးနေတာကိုချောင်းကြည့်ခဲ့ရပုံကို ပြန်စဉ်းစားနေမိခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ကိုစိုးမြင့်နှင့်မမြလေးတို့နှစ်ဦးစလုံး ကားဖြင့်ထွက်သွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရပြီး ကုတင်ပေါ်တွင်ပက်လက် လှန်စဉ်းစားနေမိရာတွင်ပုဆိုးထဲမှလီးတန်ကြီးက ထောင်ထလာရပြန်လေသည်။ ကိုလင်းမှာ ပုဆိုးကိုလျောချလိုက် ပြီး တောင်ထနေသော လီးတန်ကြီးကိုလက်ဖြင့်တင်းတင်းဆုပ်လိုက်ကာ ပွတ်သပ်ပေးနေလိုက်သည်။ “ ကျွီး…အိ……အီ…” အခန်းတံခါးဖွင့်သံကို ခပ်တိုးတိုး ကြားလိုက်ရသဖြင့် ကိုလင်းမှာ အိပ်ရာပေါ်မှနေ၍ အခန်းတံခါးဝဆီသို့ လှမ်းကြည့်လိုက်မိသည်။ သူ၏ အခန်းတံခါးမှာ ပွင့်ဟသွားပြီး အထဲသို့ လူတစ်ယောက် ဝင်လာပြီး၊ မနက်ခင်း အာရုဏ်တက်ချိန်မို့အခန်းထဲ ဝင်လာသူကိုသဲသဲကွဲကွဲ မမြင်ရချေ။
သို့သော်အခန်းတံခါးကို ပြန်ပိတ်ပြီး ကိုလင်း ကုတင်ဘက်ဆီသို့လျှောက်လာသော ဟန်ပန်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်နှင့်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ပုံစံဖြစ်ပြီး၊ ကုတင် နား နီးလာချိန်တွင်တော့အခန်းထဲဝင်လာသူမှာ မမြလေး ဖြစ်နေကြောင်း တွေ့လိုက်ရသည်။ ကိုလင်းမှာကိုစိုးမြင့်တို့လင်မယားနှစ်ယောက်ခရီးထွက်သွားပြီးအိမ်တွင်ဘယ်သူမှမရှိချိန်တွင်အခန်းထဲသို့ မိန်းမတစ်ယောက် ဝင်လာသောကြောင့် အိပ်မက် မက်နေတာများလားဟူ၍ တွေးတော စဉ်းစားမိသော်လည်း ကုတင်နားသို့ရောက်လာချိန်တွင်မမြလေး ဖြစ်နေသဖြင့်အံ့သြမှုများပင်ဖြစ်ရသည်။
ဒါဆိုရင်… ခရီးသွားသည်မှာ ကိုစိုးမြင့်တစ်ယောက်တည်းဖြစ်ပြီး မမြလေး မလိုက်သွားပဲ ကျန်ခဲ့ကြောင်း ကိုလင်း သေချာသိလိုက်ရတော့သည်။ မမြလေးမှန်း သိလိုက်သည်နှင့်ညဦးပိုင်းက ကိုစိုးမြင့်နှင့်အပြတ်လိုးကြဆော်ကြစဉ်က မမြလေး၏ စောက်ဖုတ်ပြဲပြဲကြီးကို ပြန်မြင်ယောင်မိပြီး ကိုလင်း၏ ဒုတ်ကြီးက ပိုပြီး မာတင်းကာ ထောင်ထလာတော့သည်။ လီးတန်ကြီးကိုကိုင်ဆုတ်ထားလျက် တန်းလန်းကြီးဖြစ်နေသဖြင့်ကိုလင်းမှာလက်ကိုပြန်မခွာတော့ပဲ ဒီအတိုင်းထား ကာ မျက်လုံးလေးမှေးစင်းလျက်မမြလေး ဘာများလုပ်မလဲဟုစောင့်ကြည့်နေလိုက်သည်။
မမြလေးမှာ ကိုလင်း အိပ်ပျော်နေတာ ဟုတ်မဟုတ် ကုတင်ဘေးနားကပ်လျက် လေ့လာပြီးသောအခါ ကိုလင်း တစ်ယောက်အိပ်ပျော်နေကြောင်း သေချာသွားမှ ကုတင်ပေါ်သို့ ခြင်ထောင်မကာ တင်ပလွှဲ ထိုင်လိုက် သည်။ ကိုလင်းပုဆိုးမှာ လျှောကျ ကျွတ်၍နေပြီး လီးတံမာမာကြီးက တောင်ထနေကာ ကိုလင်း၏ လက်ဖြင့် ဆုတ်ကိုင်ထားသည်ကို မမြလေးက မက်မောစွာ စူးစိုက်ကြည့်နေသည်ကို မျက်လုံးမှေးထားရင်း ကိုလင်းတွေ့မြင် လိုက်ရသည်။ ကိုလင်းမှာ အိပ်မောကျနေသယောင်ဆောင်လျက်အသက်ကို မှန်မှန်ရှူနေရင်း မမြလေး ဘာဆက်လုပ် မည်ကို အသာစောင့်ကြည့်နေသည်။
မနက်ခင်း အလင်းရောင်ခြည်က အခန်းထဲ ဝင်နေပြီဖြစ်ရာ အခန်းထဲတွင် လင်းလင်းချင်းချင်းကြီးမဟုတ်ပေမယ့် သဲကွဲစွာတော့မြင်နေရသည်။မမြလေးကကိုလင်း၏ထောင်မတ်ထနေသော လီးတန်ကြီးကို ခဏမျှကြာအောင်စိုက်ကြည့်နေရင်း ခြင်ထောင်ထဲသို့လူတစ်ကိုယ်လုံး ဝင်ကာ ကုတင်ပေါ် တက် လိုက်သည်။ လီးတန်ကြီးကို ကိုင်ဆုပ်ထားသော ကိုလင်း၏ လက်များကို မမြလေးက သူမ၏ လက်ကလေးဖြင့် အသာအယာလေး ဖြည်လိုက်ပြီး ကိုလင်းလက်ကိုဘေးဘက်သို့ညင်သာစွာ ချထားလိုက်သည်။
“ အိုး……နည်းတာကြီး ကိုမဟုတ်ဖူး…..အားရစရာကြီးပါလား….နော်……” မမြလေးက ကိုလင်းလက်ကို ဖယ်လိုက်စဉ်တွင်မာတင်းလျက်ထောင်မတ်နေသော ကိုလင်း၏ လီးတန် ကြီးကို သေချာမြင်လိုက်ရသဖြင့်ပါးစပ်မှ တီးတိုးလေး အသံထွက်ညည်းလိုက်ရင်း သူမ၏ လက်ကလေး တစ်ဖက် ဖြင့်လီးတန်ကြီးကို အလယ်လောက်မှ ဖမ်းဆုတ်ကိုင်လိုက်သည်။ ထိုအခါ မမြလေး၏ လက်ဖဝါးနုနု အထိအတွေ့ ကြောင့် ကိုလင်း၏လီးတန်ကြီးမှာ ပို၍မာတင်းပြီး ထောင်ထလာသည်။ မမြလေးမှာ သူမ၏ လက်ကလေးဖြင့် ကိုင်လိုက်သည်တွင် စောစောကထက် တင်းမာတောင်ထလာသော လီးတန်ချောင်းကြီးကို လက်ဖဝါးလေးဖြင့် စုန်ကာဆန်ကာ ဖွဖွလေး လျှောတိုက်ပွတ်ပေးနေသည်။
ထို့ပြင်အားမလိုအားမရဖြစ်လာဟန်ဖြင့်လည်း လီးတန်ကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ဖျစ်ညှစ်လိုက်မိသည်။ ထိုသို့ ဖျစ် ညှစ်လိုက်ကာမှ ကိုလင်း၏လီးကြီးက ပိုပြီးကြီးလာကာ မာတောင်လာသည်။ မမြလေးမှာ စိတ်ထဲ မချင့်မရဲဖြစ်၍ လာသဖြင့် လီးချောင်းကြီးပေါ်ရှိ အရေပြားကို အောက်ဖက်သို့ အသာလေးဆွဲချကာ လီးထိပ်ဖူးကြီးကို ဖြဲကြည့် လိုက်ရာ နီရဲလျက်တင်းကားနေသော လီးတန်ထိပ်ဖူးကြီးက မက်မောဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ထွက်ပေါ်လာ လေသည်။ မမြလေး၏မျက်လုံးများက အရောင်တွေတဖြတ်ဖြတ်လက်၍လာပြီး ကိုလင်း၏လီးတန်ကြီး အရေပြားကို ဆွဲချထားသော သူမ၏လက်ကလေးဆီမှ လက်မထိပ်လေးဖြင့် ဒစ်ထိပ်ဖူးကားကားကြီးကို ထိတယ်ဆိုရုံလေး ထိ၍ပွတ်ပေးလိုက်သည်။
ကိုလင်း၏လီးတန်ကြီးမှာ မမြလေး၏လက်ထဲတွင်တင်းခနဲတင်းခနဲ ဖြစ်ကာ ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ ထောင်ထရုန်းကန်နေသည်။ မမြလေးက ကိုလင်းမျက်နှာကို လှမ်း၍ကြည့်လိုက်ရာ မျက်လုံးလေးများ မှိတ်ကာ အသက်ကိုမှန်မှန်ရှူနေသော ကိုလင်း၏မျက်နှာကိုချစ်စဖွယ်မြင်နေရသည်။ မမြလေးက ကိုလင်းကိုကြည့်ပြီးသည်နှင့် တောင်မတ်နေသော လီးကြီးကို သူမ၏ လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆုပ်ကိုင်ကာ သူမ၏မျက်နှာကို လီးကြီးပေါ်သို့ ငုံ့၍ချလိုက်သည်။
မမြလေး၏ ပခုံးသာသာလောက်ရှိသော ဆံပင် တစ်ချို့တစ်ဝက်မှာ ကိုလင်း၏ ပေါင်ခြံနှင့်ဆီးခုံပေါ်ကို ထွေးခနဲဝဲ၍ကျသွားရာ ကိုလင်းမှာ ယားကျိကျိဖြင့်တစ်မျိုး အရသာ တွေ့သွားရသည်။ မမြလေးက ပြည့်တင်းသော သူမ၏နှုတ်ခမ်းလေးအစုံဖြင့် ကိုလင်း၏ လီးတန်ကြီးထိပ်ဖူးကို ဖိကပ်ကာ လျှာဖျားလေးဖြင့်ကလိလိုက်သည်။ကိုလင်းမှာယောင်ပြီးအသံထွက်မအော်မိအောင်စိတ်ကိုမနည်းချုပ်တည်းထား လိုက်ရသည်။ မမြလေးတစ်ယောက်သူအိပ်ပျော်နေသည်အထင်ဖြင့်လုပ်ချင်ရာလုပ်ပလေ့စေဟူ၍ လွှတ်ထားပေး ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ့အနေဖြင့်နိုးသွားမည်ဆိုလျှင်မမြလေးမှာရှက်ရမ်းရမ်းသွားမှာ ကိုစိုးရိမ်မိသဖြင့်စိတ်ထဲမှဖြစ်ပေါ်ခံစားနေရ သမျှကို ချုပ်တည်းလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။
မမြလေးက သူမ၏နှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာကို အသာဟ၍ လီးတန်ကြီး ဒစ် သာသာလောက်အထိ ဝင်အောင် ပါးစပ်ထဲ ထိုးထည့်လိုက်ပြီး မာတင်းနေသော ဒစ်ကြီး၏ အောက်ဖက်နားကို ဘယ်ညာပတ်၍ လျှာဖျားလေးဖြင့် ပွတ်သပ်ဆွဲပေးလိုက်သည်။ ကိုလင်းမှာ တောင့်ခံနေသည့်ကြားထဲမှ တွန့်ခနဲ ဖြစ်သွားရသေးသည်။ မမြလေးက ကိုလင်း၏မျက်နှာဆီကို မျက်လုံးလေးအသာလှန်ပြီး ကြည့်လိုက်သော်လည်း ကိုလင်းတစ်ယောက် အခုချိန်ထိ ထပ်မံလှုပ်ရှားခြင်း မရှိသေးသဖြင့် လီးတန်ကြီးတစ်ချောင်းလုံးကို ပါးစပ်ထဲ ဝင်နိုင်သမျှ ဝင်အောင်သွင်းလိုက်၊ ပြန်ထုတ်လိုက်ဖြင့်စိတ်ထက်သန်စွာ စုပ်ပေးနေသည်။
ကိုလင်း၏ လီးတန်ကြီးမှာလည်း မမြလေး၏ ပါးစပ်ထဲမှ တံတွေးများဖြင့် စိုရွှဲပြောင်လက်နေတော့သည်။ မမြလေးမှာ ခြင်ထောင်ကိုမလျှက် ကုတင်ပေါ်မှ ပြန်ဆင်းလိုက်သည်။ ပြီးနောက် သူမ၏ကိုယ်အထက်ပိုင်းမှ အင်္ကျီနှင့်ဘရာစီယာတို့ကို ချွတ်လိုက်ပြီး ထမီကိုပါ ဆက်၍ ဆွဲချွတ်လျက်ပုံလိုက်သည်။ ကိုလင်းမှာ မမြလေး ဘာလုပ်နေတာလဲဟု မျက်လုံးလေး အသာမှေး၍ဖွင့်ကြည့်လိုက်ရာ ကုတင်ဘေးတွင် အဝတ်အစားလုံးဝမရှိဘဲ ကိုယ်တုံးလုံးကြီးဖြစ်နေသော မမြလေး၏ အမို့၊အဝှမ်း၊ အကောက်၊ အတောင့်တို့ကို မြင်လိုက်ရသဖြင့်ရင်ထဲမှ ကာမဆန္ဒတွေ တက်ကြွလို့လာရလေသည်။
မမြလေးက ကုတင်ဘေးမှာ မတ်တတ်ရပ်လျက်ကိုလင်း၏ လျှောကျနေသော ပုဆိုးကို အသာအယာဖြင့် ဆွဲချွတ်လိုက်ရာ ကိုလင်၏အောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး ဟာလာဟင်းလင်း ဖြစ်သွားရတော့သည်။မမြလေးသည် တံ တွေးများဖြင့် စိုရွှဲလျက် မာတင်းထောင်မတ်ကာ တဆတ်ဆတ်ဖြစ်နေသော ကိုလင်း၏ လီးတန်ကြီးကို ကြည့်၍ တံတွေးတစ်ချက် မြိုလိုက်ပြီး ခြင်ထောင်မကာ ကုတင်ပေါ်တက်လျက်တစ်ဆက်ထဲပင်ကိုလင်းကို မျက်နှာမူ၍ ကိုလင်းအပေါ်သို့ကျော်ခွတက်လိုက်သည်။ ကိုလင်း၏ သံချောင်းတမျှ မာတင်းတောင်မတ်နေသော လီးတန်ကြီးကို သူမလက်တစ်ဖက်ဖြင့် ဆုတ်ကိုင်လိုက်ပြီး ကုန်းကုန်းကွကွကြီးဖြင့် သူမ၏စောက်ဖုတ်အဝကို လီးထိပ်ဖူးအား တေ့လျက်တဖြေးဖြေး ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ချလိုက်ရင်း ကိုလင်း၏လီးကြီးကိုသူမစောက်ဖုတ်ကြီးထဲ သွင်းယူလိုက် တော့သည်။
“ အား….အင့်….အီး…အား…အ….အီး….အား…အင့်အင့်..” “ ပြွတ်…ပလွတ်…ပြွတ်….ဖွတ်….” မမြလေးက အပေါ်မှဆောင့်ရတာ အားရကျေနပ်နေသည့်ပုံဖြင့် ညည်းညူလိုက်ရင်း ဖင်ကြီးကိုကြွကာ ကြွကာဖြင့်ခပ်သွက်သွက်လေး ဆောင့်၍ လိုးလေတော့သည်။ ကိုလင်းမှာ သူ့စိတ်တွေကို ဘယ်လိုမှ မထိန်းနိုင် တော့ဘဲ မျက်လုံးနှစ်လုံးကို ဖြတ်ခနဲဖွင့်လိုက်ရာ မမြလေး၏နို့အုံကြီးတွေက မျက်နှာရှေ့တွင် ဝဲနေသည်ကို တွေ့လိုက်ရသဖြင့် သူ့လက်များဖြင့် နို့အုံကြီးကို လှမ်းဆွဲကိုင်ဆုပ်လိုက်ပြီး မမြလေး၏ဖင်ကြီးကို အောက်သို့ ဆောင့်အချနှင့်အညီသူ၏ဖင်ကိုကော့ပင့်ပေးလိုက်သည်။
“ ဟင်…..ကိုလင်း…နိုး နေပြီလား….” “ အင်း…ဆက်ဆောင့်…ဆောင့်….ကိုလင်း ကောင်းနေပြီ….” “ ဖွတ်…စွပ်…ပြွတ်……….ပလွတ်…ပြွတ်…….” မမြလေးမှာ အပေါ်မှနေ၍ ဖင်ကိုကြွကာ ဆောင့်လိုး၍ကောင်းနေတုန်း ကိုလင်းနိုးလာပြီး နို့အုံများကို ဆုပ်ကိုင်လိုက်သဖြင့်လန့်သွားရပြီး အဆောင့်ရပ်မည်ပြုလိုက်ရာ ကိုလင်းက နို့တွေကို ကိုင်ထားသော လက်ကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး မမြလေး၏ တင်ပါးကြီးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ဆုပ်ထားလိုက်သည်။
မမြလေးမှာ ခဏမျှငြိမ်နေလိုက်ပြီး ကိုလင်းက တင်ပါးနှစ်ဖက်ကို ကိုင်ဆုပ်ထားသဖြင့် ချွတ်၍မရဖြစ်နေသဖြင့်ကိုလင်းပြောသည့်အတိုင်းပင်ဖင်ကို ကြွကာကြွကာဖြင့်ဆက်ဆောင့်ပေးလိုက်တော့သည်။ “ ပြွတ်….ဖွတ်…စွပ်…..ပလွတ်…ပြွတ်……………” “ ကောင်းလိုက်တာ..မမြလေးရာ…အား…အ…..ကောင်းတယ်…ဆောင့်..ဆောင့်…..” “ ပြွတ်….ဖွတ်….စွပ်……ပလွတ်……..” မမြလေးမှာ ကိုလင်းကို စကားပြောခွင့် မပေးဘဲ ကိုလင်း၏နှုတ်ခမ်းအစုံကို တပ်မက်စွာဖြင့်အတင်းငုံ၍ စုပ်နမ်းလိုက်သည်။ သူမဖင်ကြီးကိုလည်း ကြွကာ ကိုလင်း၏လီးတန်ကြီးကို စောက်ခေါင်းထဲ အဆုံးပြန်ဝင်အောင် ဆောင့်ဆောင့်သွင်းနေမြဲသွင်းလျက်ရှိသည်။
ကိုလင်းအနေဖြင့်ရမ္မက်စိတ်များ ပြင်းထန်လျက်ရှိနေရသလိုမမြလေး မှာလည်း ကိုလင်းနိုးမှာကို မပူရတော့သဖြင့်ပြင်းထန်တက်ကြွလာသော ကာမစိတ်များကိုလွှတ်ပေးလိုက်တော့ပြီး အတင်းပင်ဆောင့်ဆောင့်ချ လိုးပေးနေတော့သည်။“ အိ…အ…….ပြွတ်…ဖွတ်…..ကောင်းတယ်…ကွာ….ဆောင့်…ဆောင့်..ပါ….အ….အီး….” သိပ်မကြာခင်မှာပင် မမြလေးမှာ စိတ်တိုင်းကျ ဆောင့်နေရသဖြင့်အားရကျေနပ်မှုများ ဖြစ်လာကာ (၃) (၄) ချက်ခန့် ဆောင့်ပြီး ကိုလင်း၏လီးကြီးကို အရင်းထိဝင်အောင်ဖိကပ်လျက်ကိုလင်း၏ကိုယ်ပေါ်သို့ မှောက်ချ ဖိကပ်လျက် ကျသွားရာမှ သုတ်ရည်များကို အားရပါးရ ပန်းထုတ်လိုက်တော့သည်။
ကိုလင်းလည်း ပြီးလုပြီးခင် ဖြစ်နေတုန်း မမြလေး အဆောင့်ရပ်သွားပြီး လဲကျလာသဖြင့် မမြလေး၏ခါးကို လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် စုံကိုင်လျက် အောက်မှနေ၍ လေးငါးချက်ပစ်ဆောင့်လိုက်ရာ လီးတန်ကြီးတစ်ခုလုံး ဆိမ့်ကျင်သွားပြီး သုတ်ရည်များကိုမမြလေး ၏ စောက်ခေါင်းထဲ တပြွတ်ပြွတ်ပန်းထည့်လိုက်သည်။ ကိုလင်းက သူ၏ကိုယ်ပေါ်မှောက်ကျလာသော မမြလေး၏ကိုယ်လုံးကြီးကိုသိုင်းဖက်ထားလိုက်လေသည်။ မမြလေးမှာ စောစောက ကာမဆန္ဒတွေ တက်ကြွလွန်း၍ ကိုလင်းအပေါ်မှတက်ခွဆောင့်လိုးခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ ပြီးသွားပြီဖြစ်သဖြင့်ကာမဆန္ဒတွေလည်း ပြေပျောက်သွားချိန်တွင်မတော့ကိုလင်းအပေါ် ရှက်စိတ်များ ပေါ်လာပြီး မျက်နှာလေး နီမြန်းလျက်ရှိနေလေသည်။
“ မြလေး…” “ ဟင်…ရှင်…ကိုလင်း…” “ ကောင်းတယ်မို့လား…ဟင်….” “ အို…….ကိုလင်းကလဲ…မြလေး ရှက်ပါတယ်…မမေးပါနဲ့….” “အော်…မြလေးရယ်… မရှက်ပါ့နဲ့တော.. အခုဆို ကိုလင်းနဲ့ မြလေးတို့ အားရပါးရ လိုးပြီးနေကြမှပဲဟာ… ရှက်ဖို့လိုသေးလို့လား…” “ ကိုလင်းကလဲ..မြလေးရှက်တာပေါ့လို့… ကိုလင်းကို မြလေးက အရင်စပြီးတော့ လိုးခဲ့တာလေ…မြလေး ရှက်လိုက်တာ…” “ မြလေးရယ်… ကိုလင်းလဲလေ.. မြလေးနဲ့ အခုကြုံလို့ပါ… မြလေး တို့အိမ်စရောက်ကထဲက မြလေးရဲ့ တင်ပါးဆုံကြီးနဲ့နို့ကြီးတွေကို မြင်ပြီး လိုးချင်နေခဲ့တာပါ…” “ မြလေး..သိသားပဲ…ကိုလင်းဖြစ်နေတာတွေကို… ဒါပေမယ့်..မြလေး အခုလို စပြီးလိုးတာမို့ မြလေးကို အထင်မသေးရဘူး..နော်….”
“ အထင်မသေးပါဘူး.. မြလေးရဲ့.. မြလေးကို အထင်မသေးတဲ့အပြင်မြလေးကို အရမ်းချစ်သွားရပါသေး တယ်.. တကယ်..ပါ.. မြလေးကိုသိပ်ချစ်တာပဲ…ကွယ်..” “ တကယ်နော်..ကိုလင်း… ပြီးတော့ ဟို…ဟိုလေ…မြလေးတို့ ဒီအိမ်ကိုစရောက်တုန်းကတည်းက ကိုလင်း မြလေးကိုကြည့်တဲ့အကြည့်တွေထဲမှာ မြလေးကိုလုပ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေ ပြင်းပြနေမှန်း မြလေး သိတယ်.. နောက်ပြီး… မြလေးတို့ည ည လိုးကြတဲ့အခါလည်း ကိုလင်းချောင်းကြည့်နေမှန်းလဲ မြလေး သိတယ်… သိလား…” “ ဟင်…ကိုလင်းချောင်းကြည့်တာ မြလေး သိတယ်.. ဟုတ်လား…” “အင်း…သိတာပေါ့…ကိုလင်းရဲ့..ကိုလင်းမြလေးတို့ကိုချောင်းဖို့အပေါက် ဘယ်နှပေါက်ဖောက်ထားတယ်. ဆိုတာ ပြောပြရအုံးမလား…”
“ ဟာကွာ…တကယ်ပါပဲ..မြလေးကတော့အကုန်သိနေတာကိုး…” “ သိရုံတင်မကဘူး… ည ညဆိုကိုစိုးနဲ့မြလေးတို့လိုးကြတာကိုကြည့်ပြီး ကိုလင်း မနေနိုင်တော့လို့ဂွင်းတိုက် နေတာလဲ သိလို့မြလေး သနားတာနဲ့အခုလို ကြံပစ်လိုက်တာ..” “ အော်…မြလေး…အချစ်ရယ်… ” “ အော်..ဒါနဲ့ကိုစိုးမြင့်ခရီးသွားတာ မြလေး မလိုက်သွားဘူးလား…” “ ကိုစိုးက နေပြည်တော်သွားတာဆိုတော့ ကြာမှာလေ ကိုလင်းရဲ့.. အနည်းဆုံး သုံးလေးရက်တော့ ကြာ မယ်.. မြလေးလဲ အစကတော့ လိုက်သွားအုံးမလို့ဟာ…ပဲ.. ဒါပေမယ့် ကိုလင်းတစ်ယောက်တည်း ကျန်နေခဲ့မှာ သနားလို့…လိုက်မသွားတော့တာ…” “ ဒီလောက်တောင်ပဲလား…မြလေးရယ်…” “ ဒီထက်တောင်ပိုသေးတယ်..ရှင့်…သိရဲ့လား..ဟွန့်……” ကိုလင်းက မမြလေး၏ ကိုယ်လုံးအား ဖက်ထားရင်းစကားပြောနေကြခြင်းဖြစ်သည်။
မမြလေး၏ စောက်ဖုတ် ထဲတွင်ကိုလင်း၏လီးတန်ကြီး တပ်လျက်တန်းလန်းဖြင့်ကိုယ်ပေါ်တွင်မှောက်ထားသော မမြလေးကို စကားပြော နေခြင်းဖြစ်ရာ ပထမဦးစွာ ရှက်နေသော မမြလေးမှာ အခုဆိုလျင်ရှက်စိတ်များ ကွယ်ပျောက်သွားပြီ ဖြစ်သည်။ ကိုလင်းက မမြလေး၏ ကျောပြင်ကို ဖက်ထားသော လက်များအား အငြိမ်မနေဘဲ ပွတ်သပ်လှုပ်ရှားပေးနေသည်။ မမြလြေး၏ စောက်ဖုတ်ထဲတွင်ဝင်နေသော လီးတန်ကြီးကလည်း မမြလေး၏ စောက်ခေါင်းနံရံများနှင့်ထိတွေ့မှု ကြောင့်ပြန်လည်မာကျောလာပြီဖြစ်သည်။ မမြလေး၏ နို့အုံကြီးကလည်း ကိုလင်း၏ ရင်ဘတ်ပေါ်တွင်ဖိထားသဖြင့်နို့အုံကြီး၏ အထိအတွေကလည်း ကိုလင်း၏ ရမ္မက်စိတ်များကို နှိုးဆွပေးနေသည်။
မမြလေးမှာလည်း စကားပြောနေရင်းမှနေ၍ ရှက်စိတ်များ ကွယ် ပျောက်ကုန်ပြီ။ ကိုလင်း၏ သနားစဖွယ်အမူအရာနှင့်သူမကို လိုးချင်စိတ်များ အမြဲဖြစ်ပေါ်နေတတ်သည်ကိုလည်း သိပြီးဖြစ်သဖြင့်ယခုလိုအစပျိုးပြီးလိုးဖြစ်ကြရာ နောက်ထပ်၍လိုးကြရန်ဆန္ဒများ ဖြစ်ပေါ်နေကြလေသည်။ သူမ၏ စောက်ဖုတ်ထဲ တပ်လျက်သားကြီး ဖြစ်နေသေးသော ကိုလင်း၏ လီးတန်ကြီးမှာလည်း တဖြည်းဖြည်း မာလာ သောအထိအတွေ့ ခံစားမှုကြောင့်ကိုလင်း၏အလိုးကိုတဖန်ပြန်၍ ခံချင်လာသော ကာမရမ္မက်တို့ကလည်း ဖြစ်ပေါ် လာသည်။
“ ကိုလင်း…..” “ ဟင်…ဘာလဲ…မြလေး…” “ ဟိုလေ…. မြလေးကို ကြည့်ပြီး ကိုလင်း လိုးချင်နေတယ်…မဟုတ်လား…” “ လိုးချင်တာမှ..တပိုင်းသေနေတာပေါ့…မြလေး…ရယ်….” “ နောက်ပြီး ချောင်းကြည့်တိုင်း တွေ့ရတဲ့ မြလေးရဲ့ စောက်ဖုတ်ဖောင်းဖောင်းအိအိကြီးကလဲ ကိုလင်းကို လိုးချင်စိတ်တွေ တဖွားဖွား ပေါ်စေတယ်လေ….” “ ဒါကြောင့်မြလေးက ကိုလင်းလိုးရအောင်ကြံဖန်ပေးတာပေါ့…” “ ကဲ…ဒါဆို….” “ ဒါဆိုရင်…ဘာဖြစ်လဲ…ကိုလင်းရဲ့…” “ ကိုလင်းတို့တစ်ချီလောက်ထပ်ပြီး လိုးကြရအောင်…” “ ကိုလင်းသဘောပါ…မြလေးလေ… ကိုလင်း ဘယ်လောက်လိုးလိုး အလိုးခံဘို့အသင့်ပါပဲ…ရှင်…” “ ဒါဖြင့်…ခဏကြွအုံး…ကိုလင်းပြမယ်…” “ ပြွတ်…..” မမြလေးက ကိုလင်းအပေါ် မှောက်ချထားရာမှ ကြွပြီးထလိုက်ရာ ကိုလင်း၏ လီးတန်ကြီးမှာ သူမ စောက် ဖုတ်ထဲမှ ပြွတ်ခနဲ ကျွတ်ထွက်သွားလေသည်။
ပြီးနောက်ကိုလင်းဘေးတွင်ယှဉ်လျက်မမြလေးက လှဲအိပ်လိုက် သည်။ မမြလေး၏ နို့အုံထွားထွားအိအိကြီးများနှင့်အတူလှပသော ကိုယ်လုံးဖွေးဖွေးကြီးကို ကြည့်၍ ကိုလင်း လီး တန်ကြီးမှာ တဆတ်ဆတ်ဖြင့်တောင်မတ်လာသည်။ကိုလင်းက မမြလေး၏ ပြည့်ဖြိုးတင်းမာနေသော နို့များကို လက်တစ်ဖက်နှင့်ဖွဖွရွရွလေး ပွတ်သပ်လိုက်ပြီး နို့အုံတစ်လုံးကို ပါးစပ်နှင့်ငုံကာ တပြွတ်ပြွတ်နေအောင်စို့လိုက် သည်။ နို့အုံတစ်လုံးကိုငုံစို့လိုက်ပြီး နို့သီးခေါင်းလေးကိုသွားဖြင့်မနာတနာလေး ကိုက်ပေးသည်။
မမြလေး၏ ပေါင် တွင်းသား တလျှောက်ကိုလည်းလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ပွတ်သပ်ဆုပ်ချေပေးလိုက်သည်။ ထိုမှတဆင့်မို့ဖောင်းပြည့်တင်း နေသောစောက်ဖုတ်အကွဲကြောင်းတလျှောက်ကိုလက်ဖြင့်ပွတ်ပေးလိုက်ပြီးစောက်စေ့လေးကိုပါပွတ်ခြေပေးလိုက် သည်။ “ အင်း…ဟင်း….ဟင်း…ကိုလင်း ရယ်…” မမြလေးတစ်ယောက်တဒင်္ဂငုတ်လျှိုးသွားသော ကာမဆန္ဒတွေ တရိပ်ရိပ်ပြန်တက်လာရ၍ ညည်းညူလိုက် မိသည်။ ကိုလင်းက မမြလေး၏ အသားဆိုင်များကို ပွတ်သပ်ချေမွပေးပြီး မမြလေး၏ နှုတ်ခမ်းလေးကို သူ့နှုတ်ခမ်း နွေးနွေးဖြင့် ဖိကပ်စုပ်နမ်းလိုက်ရာ ကိုလင်း၏ကျောပြင်ကြီးကို မမြလေး လက်လေးများဖြင့် အတင်းဖက်တွယ် လိုက်သည်။
မမြလေးမှာ စောက်ခေါင်းတလျှောက် ရွစိရွစိဖြစ်လာပြီး စောက်ရည်များ ထွက်လာရပြီဖြစ်သည်။ ကိုလင်း၏ နှုတ်ခမ်းများကိုစုပ်နမ်းရင်း နို့တွေကိုပွတ်သပ်ချေမွနေမှုကြောင့်မမြလေးမှာ ခါးကိုကော့ပစ်လိုက်မိသည်။ “ ဟင်း ဟင်း… ကိုလင်းရယ်.. မြလေး မနေတတ်တော့ဘူး.. ကွယ်… အား.. အီး…လုပ်မှာဖြင့်လဲ လုပ်ပါတော့ ရှင်ရယ်…” မမြလေးမှာ တက်ကြွလာသော ကာမစိတ်များကြောင့် မအောင့်နိုင်တော့ဘဲ ကိုလင်းကို လိုးဖို့ ပါးစပ်မှ ထုတ်ပြောလိုက်ရတော့သည်။ကိုလင်းက မမြလေးကိုယ်ပေါ်မှ ထလိုက်ပြီး မမြလေး၏ ပေါင်နှစ်ချောင်းကြား ဝင်ထိုင်လျှက် သူ၏ပေါင်နှစ်ဖက်ပေါ်ကို မမြလေး၏ ပေါင်နှစ်လုံးအား တစ်ဖက်တစ်ချက်စီ ဆွဲတင်လိုက် သည်။
မမြလေး၏ ဟပြဲလာသော စောက်ခေါင်းပေါက်ဝသို့ ကိုလင်းက သူ့လီးတန်ကြီးဖြင့် တေ့ပြီး စောက်ဖုတ် အကွဲကြောင်း တလျှောက်လီးတန်ကြီး ထိပ်ဖြင့်မွှေဆွကလိပေးလိုက်သည်။ မမြလေး၏ စောက်စိလေးကိုလည်း သူ၏ လီးဒစ်ကြီးဖြင့်ဆတ်ခနဲဆတ်ခနဲ ထိုးပေးလိုက်ပြန်သည်။ “ ဟင့်ဟင့်…ကိုလင်းရယ်.. အား….အီး…လိုးပါတော့…လို့…ဆို….” “ အင်း…လိုးတော့မယ်…နော်…မြလေး..” “ လိုးပါ ..ကိုလင်းရယ်.. မြလေး စောက်ဖုတ်ထဲ ကိုလင်းလီးကြီးနဲ့လိုးသွင်းလိုက်ပါတော့…မြလေး မနေနိုင် တော့ဘူး….အီး…အ……..” “ ပြွတ်….ဗြစ်……..” ကိုလင်းက လိုးမည်ဟုပြောပြီးသော်လည်း မမြလေး၏ စောက်ခေါင်းဝတဲ လီးတန်ထိပ်ဖူးကြီး ဝင်အောင် ပြွတ်ခနဲသွင်းလိုက်ကာ ဆက်ပြီး မသွင်းသေးဘဲ တန်းလန်းထားလျက်မမြလေး၏ နို့အုံကြီးတွေကို ဆုပ်နယ်နေ လိုက်သည်။
မမြလေးမှာ ကြွနေရွနေပြီ ဖြစ်သဖြင့် ဘယ်လိုမှ မနေနိုင်တော့လောက်အောင် ဖြစ်လာသောကြောင့် လီးတန်ကြီးကို လက်တစ်ဖက်ဖြင့် ကိုင်ဆွဲလျက် စောက်ခေါင်းထဲ ဆွဲသွင်းလိုက်ရင်း သူမ၏စောက်ဖုတ်ကြီးကို ကော့ပြီး ပင့်တင်ပေးလိုက်ရာ လီးတန်ကြီး တစ်ဝက်သာသာလောက်စောက်ခေါင်းထဲ တိုးဝင်သွားသည်။ မမြလေးက ကိုလင်း၏ လီးတန်ကြီးကိုကိုင်ထားသော လက်ကလေးကိုဖယ်လိုက်ပြီး ကိုလင်း တင်ပါးနှစ်ဖက် ကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ဆုပ်ကိုင်ဆွဲချပြီး သူမဖင်ကြီးကိုလည်းထပ်မံကော့တင်ပစ်လိုက်ရာလီးတန်ကြီးတစ်ချောင်းလုံး သူမ၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့အဆုံးတိုင်ဝင်သွားလေတော့သည်။ ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ကောငျးတာထကျတောငျပိုသေးတယျရှငျ့